မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: ဋ္ဌေးနိုင် မိသားစု 1, 2,3,(မေသင်္ကြန်ဟိန်း)
y May Thingyan Hein on Saturday, October 6, 2012 at 12:39pm ·
အောက်တိုဘာ ၆၊ ရန်ကုန်မြို့။
မိသားစုတိုင်း မိသားစုတိုင်းမှာ ရှိနေကြတဲ့ ချစ်မြတ်နိုးခြင်း၊ တန်ဖိုးထားခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း…စတာတွေရဲ့ လေးနက်မှုနဲ့ တန်ဖိုးဆိုတာကို လူတိုင်း နားလည်ခံစားနိုင်ကြပါတယ်။
အဲဒီခံစားချက်တွေကိုအခြေတည်ပြီး ဖြစ်တည်ရှင်သန်နေကြရင်း ကိုယ့်မိသားစုထဲက တစ်ဦး ဦးကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆုံးရှုံးရချိန်မှာ လူတိုင်းဟာ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ ကြေကွဲခြင်းနဲ့အတူ နှမျောတသဖြစ်ခြင်း ဆိုတဲ့ စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ရာ ခံစားချက်တွေကို တသီကြီး ခံစားကြရတာပါ
ကိုဋ္ဌေးနိုင်ရဲ့ မိခင်နဲ့နှမသားချင်းတွေကို တွေ့ဆုံလိုက်ရချိန်မှာတော့ သူတို့တွေမှာ အဲဒီလို ခံစားချက်တွေထက်ပိုတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ထိခိုက်နာကျင်ခံစားနေကြရတာကို တွေ့မြင်ရသလို နာကျင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ မိခင်အိုတယောက်ကိုလည်း စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာ တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
“မသေခင်မှာ ရက်ရက် စက်စက် စွပ်စွဲခံရပြီး ရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေရှိတယ် သိသိချင်း ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်တော့ဘူး… သူ မသေခင် ဘယ်လောက်ခံစားလိုက်ရရှာမလဲ ဆိုတဲ့…စိတ်နဲ့.. အိမ်ရာထဲ ဘုန်းဘုန်းလဲတော့တာပဲ“
မိခင်တယောက်အနေနဲ့ သားဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းခြင်း၊ နှမျောတသဖြစ်ခြင်း၊ ကြေကွဲခြင်းတို့အပြင် … ရက်ရက်စက်စက် ကြုံတွေ့ခဲ့ရှာရပါလား ဆိုတဲ့ သားအပေါ် မိခင်တယောက်ရဲ့ကြင်နာသနားခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နာကြင်ခြင်းနဲ့ မဖြေသိမ့်နိုင်ခြင်းတို့ကိုလည်း တွေ့တွေ့ခြင်းနားလည် ခံစားစေခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလို မျက်ရည်စိုနေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ သွေ့သွေ့ခြောက်ခြောက် မိခင်အိုတယောက်၊ သား သေဆုံးမှုအတွက် နာကြင်ခံစားနေရတဲ့ မိခင်အိုတယောက်၊ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေလို့ မဖြေသိမ့်နိုင်လောက်အောင် ကြေကွဲနေတဲ့ မိခင်အိုတယောက်…ကို ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေနဲ့ စရမလဲ။ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ကိုဋ္ဌေးနိုင်ရဲ့ ရုပ်လုံးပေါ်လာအောင် ဘယ်လိုမေးရပါ့လို့ စဉ်းစားရင်း ကျမအတွက်လည်း ပင်ပန်းခက်ခဲလွန်းလှပါတယ်။
ကျမက ကိုဋ္ဌေးနိုင်ရဲ့ ညီမ အေးအေးမာပါ။ ကိုဋ္ဌေးနိုင်ကို အမေတို့က ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ မွေးခဲ့ပါတယ်။
ကျမတို့ အဖေက ၁၉၅၈က စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ရပြီး၊ တရုပ်ကျူးကျော်ရန်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် တပ်မတော်ထဲ ၀င်သွားပြီး တပ်မတော်အမှုထမ်းခဲ့သူတဦးပါ။
ကျမတို့ မောင်နှမတွေက အဖေတာဝန်ကျတဲ့ ဒေသတွေကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲလို နေထိုင်ရင်းနဲ့ ၁၉၇၈ မှာ တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးရဲ့ မယုံကြည်ရတဲ့ အရာရှိ ၉၆ ဦး စာရင်းထဲမှာ ပါခဲ့တဲ့အတွက် အဖေ တပ်မတော်ကနေ ထုတ်ပါယ်ခြင်း ခံခဲ့ရတယ်။
ကျမအနေနဲ့ အကိုဖြစ်သူ ဋ္ဌေးနိုင်ရဲ့ ဘောလီဘောကစားရင်း အောင်မြင်ခဲ့တာကို ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေသေးတယ်။
အကိုငယ်( ကိုဋ္ဌေးနိုင်)က ကျမတို့ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အားကစားကို ၀ါသနာပါတယ်။ ဘောလီဘော ကစားတာကောင်းတယ်။
သူက ကျမရဲ့ အကိုကြီး ကိုဋ္ဌေးတင့်လို စကားသိပ်မပြောဘူး။ သူက တည်တည်တန့်တန့်နေတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ညီမတွေအပေါ်ကိုတော့ ဂရုစိုက်တယ်၊ မိသားစုအပေါ်မှာလည်း သံယောဇဉ်ကြီးတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ခပ်အေးအေးနေတတ်ပြီး စကားကိုလိုရင်းပဲ ပြောတတ်တယ်။ ပြီးတော့ သူက လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း လုပ်တယ် မလုပ်ဘူး ဆိုရင်လည်း လုံးဝ မလုပ်ဘူး ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ် နေတတ်တဲ့ သူမျိုး။
သူက ဆယ်တန်းတက်တော့လည်း အားကစားချည်းလုပ်နေတာနဲ့ တော်တော်နဲ့ မအောင်ဘူး ၅ နှစ်လောက်နေပြီး ဖြေရတယ်။ အဲဒီ ၅ နှစ်လုံး ဘောလီဘောပဲကစားနေတော့ ဘောလီဘောမှာတော့ ထူးချွန်တယ်ပေါ့နော်။
ကျနော် ရှစ်တန်းလား ကိုးတန်းလား ရောက်တဲ့ နှစ်မှာ အကိုက တက္ကသိုလ်တက်နေပြီ။ သူက လှိုင်ဒေသကောလိပ်မှာ သချာင်္အဓိကနဲ့ ၁၉၈၄ မှာ ၀င်ခွင့်ရပြီးကျောင်းတက်တယ်။ ကျောင်းမှာ ဘောလီဘောကစားတာ ထူးချွန်လို့ နာမည်ကြီးတယ်ပေါ့။
ဘောလီဘောကစားတဲ့ သူ့နံပတ်က4ဆိုတော့ သူ့ကို No.4 ဆိုရင် လူတိုင်း သိတယ်။ သူက ပထမနှစ်ကနေ နောက်ဆုံးနှစ်ထိ ဒီနံပတ်ကိုပဲ ယူသွားတာဆိုတော့ သူ့ကို ကျောင်းကတွဲသိတာက No.4 လို့ တွဲသိတာပေါ့။
ဘောလီဘောကစားတဲ့အခါမှာလည်း သူက လူကြိုက်များတဲ့ ထဲမှာပါတယ်၊ ကျမတို့ စတိတ်ကျောင်းသူ ဘ၀ကတည်းက အကို ဘောလီဘောစကားတဲ့ နေရာတွေကို လိုက်လိုက်ပြီး အားပေးခဲ့တာ။ သူက RC-2 ပေါ့ ဆရာကြီး ဦးကောင်းညွှန့်လက်ထပ်မှာ ဆရာကြီးနဲ့ တွဲပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေလည်း သူ့မှာ ရှိတယ်။
မှတ်မှတ်ရရပဲ သူက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆောင်မှာ ဖဲရိုက်တယ်၊ ဖဲရိုက်တော့ သူတို့ကျောင်းက ပါချုပ်က အမေ့ကို ခေါ်တယ်ပေါ့။ ကိုဋ္ဌေးနိုင်ကိစ္စကို လာရှင်းဖို့ပေါ့။ အမေက သွားရှင်းတဲ့အချိန်မှာ အမေ ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ အကိုငယ်က ရှင်းပြီးပြီ။ ပါချုပ်အခန်းရှေ့မှာပဲ အမေ သွားရှင်းဖို့ မလိုတော့ဘူး ဆိုပြီးတော့ သူက ပြောတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက အဲဒီလို မဖြစ်ခင် ၂ ရက် ၃ ရက်လောက်အလိုမှာပဲ ကျောင်းမှာ အကောင်းဆုံး အားကစားသမားဆု ရထားတယ်၊ ရထားတော့ သူ့ကို ပါချုပ်က မှတ်မိနေတယ်။ အဲဒါတွေလည်း ပါမှာပေါ့။ ကျမအတွက်ကတော့ လူကြိုက်များတဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ ခပ်တည်တည်ခပ်အေးအေးနေတတ်တဲ့ အကိုအတွက် ဂုဏ်ယူမိတာပေါ့။ ၁၉၈၆ မှာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ပဏာမထိ အရွေးခံခဲ့ရတယ်။
နောက် ၁၉၈၈ မှာ ကျနော်က ဒုတိယနှစ်တက်ပြီ အကိုက နောက်ဆုံးနှစ်ပေါ့နော်။ တံတားနီ အရေးအခင်းဖြစ်တဲ့ နေ့ကို မှတ်မိနေသေးတယ်။
အဲဒီနေ့က ကျနော့်အကိုက စိတ်တွေ တိုပြီး အိမ်ပြန်လာတာ ကျနော်မှတ်မိတယ်။ သူက ပါးစပ်ကလည်း ကျောင်းသူလေးတွေကို …ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပေါ့…အဲလိုလည်း ပြောပြီး စိတ်တွေအရမ်းတိုပြီး အိမ်ပြန်လာတယ်။ အဲဒီလို သူ စိတ်တိုလာတာကိုလည်း ထူးခြားလို့ မှတ်မိနေခဲ့တယ်။
နောက် မြေနီကုန်းအရေးအခင်းပေါ့။ အဲဒီမြေနီကုန်းအရေးအခင်းမှာတော့ သူကိုယ်တိုင်ပါနေခဲ့ပြီ။ သူကိုယ်တိုင် ပါဝင်နေတော့ မျက်ရည်ဗုံးအကွဲခံရတာတွေလည်း သူပြောပြတယ်။ မျက်ရည်ဗုံးထိတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို လိုက်ရှာပြီး ဖမ်းတာတို့ ဘာတို့လည်း ရှိတော့ အဲဒီမြေနီကုန်းက စာပေဗိမာန်ဆိုလား…ဘယ်ဋ္ဌာနကလည်းတော့ သေချာမသိဘူး သူတို့က မျက်ရည်ယိုဗုံးထိတဲ့ကျောင်သားတွေကို မျက်နှာတွေ ကယ်ပြီး သစ်ပေးပြီးမှ စိတ်ချရတဲ့အချိန်မှ အပြင်ထွက်ခွင့်ပေးတာပေါ့ အဲဒီအကြောင်းတွေလည်း သူပြောပြလို့ သိရတာပါ။
အဲဒီနေ့ကလည်း အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ အမေရယ် …သေကုန်ပြီ …ကျောင်းသားတွေ သေကုန်ပြီ ဆိုပြီးတော့…ငိုပြီး ပြောတာ။ သူ မျက်ရည်ကျတာပေါ့နော်..အဲဒီကနေ သူက နိုင်ငံရေးဘက်ကို ရောက်သွားတော့တာ။
မိန်းထဲမှာလည်း ကိုမောင်မောင်ကျော်တို့နဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ် အဲလို လည်း တစွန်းတစ ကြားရတယ်။ သူ နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ အိမ်ကတော့ အဲလိုပဲ နေလိုက်တာပေါ့။
အဲဒီမှာ ၁၉၈၈လောက်မှာပဲ့ တအားအုံကြွလာတဲ့အချိန်မှာ သူ အပြင်တွေ ဘာတွေ သိပ်မထွက်တော့ဘူး။သူ အိမ်ထဲမှာပဲ နေတာ များတယ်။ အဲဒီတုန်းက တကယ်လုပ်တာက ကိုကြီး သူက လှိုင်မြို့နယ်ကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေ ဘာတွေလုပ်တယ်။
ကျနော်တို့အဲဒီတုန်းက နေတာ လှိုင်မှာဆိုတော့ လှိုင်မြို့နယ်မှာ အဲဒီတုန်းက ပြဿဖြစ်သေးတယ်။ တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာ တပ်နဲ့ ပြည်သူတွေကြားထဲမှာ ရပ်ပေးပြီး လုပ်ပေးတာတွေဘာတွေ ရှိသေးတယ်။ သူက တကယ်တော့ြ့ပဿနာ မဖြစ်အောင်ရှင်းပေးတာ၊ အဲလို ရှင်းပေးတာကို ဥက္ကဋ္ဌက တပ်နဲ့ ပေါင်းတာလား ဆိုပြီး အထင်လွဲတာတွေ ဘာတွေလည်း ရှိတယ် ကျနော်တို့ရဲ့ အကို…ကို။
အဲဒီလိုပဲ နိုင်ငံရေးလုပ်နေကြရင်းနဲ့ နောက်ကျတော့ တော်တော်များများလည်း ထွက်ကုန်ကြတယ်၊ အကိုတို့လည်း ဆက်နေလို့မရတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ကိုကြီးက ကျနော်ရှောင်နေလိုက်မယ် အမေ ဆိုပြီး အမေ့ကို ခွင့်တောင်းတော့ ကိုငယ်ကလည်း ကိုကြီးကို စိတ်မချဘူးတဲ့ …သူလည်း လိုက်သွားမယ်ပေါ့၊ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ထွက်ကုန်ကြပြီဆိုတော့ သူလည်း ညီအကိုနှစ်ယောက်အတူတူ ထွက်မယ်လို့ ခွင့်တောင်းပြီး ထွက်သွားခဲ့ကြတာ။
အဲဒီကတည်းက ညီအကို နှစ်ယောက် ထွက်သွားလိုက်ကြတာ…ဒီနေ့ထိ အိမ်ပြန်ရောက်မလာကြတော့ဘူး။
၁၉၉၄ လောက်မှာတုန်းကတော့ ကိုဋ္ဌေးနိုင် သတင်းသဲ့ သဲ့ကို ကြားရသေးတယ်၊ နယ်စပ်ဘက်သွားတဲ့ ကုန်သည်တယောက်ဆီကလား ဘယ်ကလဲတော့ သေချာမသိတော့ဘူး။ ကိုဋ္ဌေးနိုင် ကို ဆေးထိုးသတ်လိုက်တယ်…တဲ့။ ကိုဋ္ဌေးနိုင် အချုပ်ခန်းထဲမှာ ၀ဲတွေပေါက်တယ်တို့…အဲလိုမျိုး ကြားရတာ တခုမှလည်း မကောင်းဘူး၊ ကြားတော့ သေချာမေးတော့လည်း ဘယ်သူကမှ သေသေ ချာချာ မပြောနိုင်ဘူး ဆိုတော့ ကျနော်တို့က မယုံဘူး။ ဘာမှလည်း တိတိကျကျ မသိရဘူး၊ အစိုးရကပဲ တောခိုသွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲ သတင်းလွှင့်သလား ဆိုပြီးတော့ မယုံခဲ့ဘူး။ လာပြောလို့ကြားရင်လည်း အရေးမလုပ်ဘဲနဲ့ အမှန်လို့ကို မယူဆခဲ့ဘူး။ အဲလိုနဲ့ပဲ နေလာတာ။
အဲလိုနဲ့ နေလာတုန်းမှာ ၁၉၉၅ မှာ ကိုကြီး ကိုဋ္ဌေးတင့်က စပြီး ဖုန်းဆက်တယ်။ ဖုန်းဆက်တော့ ကိုငယ်ရောလို့ မေးတယ်၊ မေးတော့ သူက ဋ္ဌေးနိုင် မြောင်းထဲ ရောက်သွားပြီလို့ သူကလည်း အဲဒါပဲ ပြောတယ်။
အကိုကြီးကတော့ ဖုန်းနဲ့ အသံလေး ဘာလေး ကြားရသေးတယ်။ အကိုငယ်ကိုတော့…အဲဒီနေ့ကတည်းက စပြီး အသံလည်း မကြားရ လူလည်း မမြင်ရ တော့တာ၊ ပြီးတော့ သတင်းလည်း မကြားရဘူး။ အကိုကြီးကလည်း ပါးစပ်ကနေ ပြောမထွက်လို့ ထင်ပါရဲ့ အကိုငယ်အကြောင်း မေးရင်လည်း မပြောဘူး။
သူက မြောင်းထဲရောက်သွားပြီလို့ ပြောတာက သေတယ်လို့လည်း ယူဆမယ်ဆိုရင် ယူဆလို့ရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် မကောင်းတဲ့ နေရာ တခုခုကို ရောက်သွားတယ်လို့လည်း ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့..ကျနော်တို့လည်း ဇဝေဇ၀ါနဲ့ပဲ နေလာတာ။ သူက မပြောပေမဲ့ အိမ်က သိချင်တာပေါ့နော်။ တခုခုတော့ တခုခုပဲပေါ့၊ ဘာမှန်းလည်း မသိဘူးပေါ့။
စိတ်ပူတာတော့ ပူတာပေါ့။နောက်တော့ ခုလို …သူများတွေ အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်လာပြီး ကိုယ့်အကိုတွေ ပြန်မရောက်လာတော့မှ အကိုကြီးက အကိုငယ်အကြောင်း ကိုပြောပြတယ်။
ကြားကြားခြင်း ကျနော်တို့ မိသားစုတော်တော်လေး ခံစားရပါတယ်။ သူ့ကို ဘယ်လိုနှက်စက်တယ်တို့ ဘာတို့ ကြားရတော့ ….
သူ မသေခင်…ဘယ်လောက် ခံစားလိုက်ရမလဲ…ဆိုတဲ့ စိတ် နဲ့…ကျနော်တို့ အရမ်း စိတ်ထိခိုက်တယ်။
-------------------အမေလည်း အိပ်ရာထဲ လဲ…။
ကျနော်တို့တောင် ဒီလောက်ခံစားရတာ အမေဆိုရင်… အိပ်ယာထဲ လဲတော့တာပဲ။
အဲဒီအချိန်မှာ မိုးသီးဇွန်တို့ကလည်း မြန်မာပြည် ပြန်လာတာတွေကို ဂျာနယ်တွေစာစောင်တွေထဲမှာ ပါတာ ဖတ်ရတယ်၊ ဂျာနယ်တစောင်ထဲမှာ သူက ကိုဋ္ဌေးနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မဟုတ်တာတွေ ပြောထားတာ ရေးထားတာလည်း တွေ့ရတယ်။
ကျနော်တို့ အကို ကိုဋ္ဌေးနိုင်က ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့က သိတာပေါ့။ အဲဒါကို မဟုတ်တာကို စွပ်စွဲပြီး နှိပ်စက်တာ သေတဲ့အထိတောင် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ ဒေါသလည်း ထွက်တယ်၊ အရမ်းလည်း ခံပြင်းတယ်။
(၂)ဒေါ်ခင်မေမြင့်( ကိုဋ္ဌေးနိုင်ရဲ့ မိခင်)
ကျမ သား ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ အမေ တယောက်အနေနဲ့ ကျမ သိတယ်။ လုံးဝလည်း အာမခံတယ်။
အမေတယောက်အနေနဲ့ သူ့ကို ထောက်လှမ်းရေးလို့ စွပ်စွဲတာကိုလည်း လုံးဝ ငြင်းပါယ်တယ်။ သေချာ အာမခံပြီးတော့လည်း သူ ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်တဲ့အကြောင်း ကိုပြောနိုင်တယ်။
အမေကတော့ကိုယ့်သား အတွက် အမှန်တရားဖော်ထုတ်ချင်တယ်၊ မိုးသီးဇွန် သူ့ဟာသူ နိုင်ငံရေးလုပ်တာ မလုပ်တာကိုလည်း ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တော့ စိတ်မ၀င်စားဘူး။ အမေကတော့ အမေ့သား ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် အမှန်တရားကိုတော့ ဖော်ထုတ်ရမယ်။ ဖော်ထုတ်ချင်တယ်။ ခံထားရတာ ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်စက်ခဲ့တာဆိုတော့လေ။
သာ ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို အမေက ရဲရဲအာမခံနိုင်တယ်။ ဒါကိုအမေ ကောင်းကောင်း သိတာပေါ့။
အမေ့မှာက သားနှစ်ယောက်တောခိုသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ အမျိုးသားကလည်း ဋ္ဌာန ဆိုင်ရာကဆိုတော့ ရှင်းရတာတွေလည်းရှိတယ်။ သားနှစ်ယောက် တောခိုသွားတော့ အန်ကယ်က ဖြေရှင်းချက်တင်ရတယ်။ သားတွေ ထွက်သွားလို့ ဋ္ဌာနက အလုပ်ကို ထိခိုက်တာမျိုးတွေ ဘာတွေတော့ မရှိပါဘူး။
သူကတော့ “ဒီအရွယ်ကြီးတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လိုက်အုပ်ချုပ်လို့ရမှာလဲ၊ သူတို့ ရည်ရွယ်ချက် သူတို့ ခံယူချက်နဲ့ လုပ်ကြတာ ကျနော်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး“ လို့ အဲလိုပဲ ပြောတယ်။
အန်တီတို့ အိမ်က သားသမီးကို ဖိနှိပ်ထားတဲ့ အိမ်မျိုး မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကိုယ်ပေါ့။ဟိုတုန်းကလည်း အန်တီ သားသမီးကို အဲလိုပဲ ပြောတယ် သူတို့ယုံကြည်ချက် သူတို့ ခံယူချက်ပေါ့ မိဘနဲ့ အမြင်မတူတာလည်းရှိမှာပေါ့။
You, Zar Phyu Aye, နိုင် ဦး, Nyi Nyi Aung and 57 others like this.
A Shin Kawlay စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
Saturday at 1:29pm · Like
Mg Aye တရားခံ မိုးသီးကတော့ပြည်တွင်းပြန်ရောက်နေဘီ အမှုမှနိပေါ်ပေါက်ဖို့ ကို လုပ်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ် တရားခံကို အလွတ်မခံပါနဲ့ဒီအမှုတွေအတွက် သူကိုယ်တိုင်ပြန်ခံစား ရပါစေ ဒီလိုလူမျိုးတွေလက်ထဲကိုသာ အာဏာရလို့ ကတော့ တွေးတောင်မတွေးဝံဘူး
Saturday at 1:44pm · Like · 5
Thant Zin Bravo Ma May Thingyan。 You r the only one person who can solve n justice who lost their love knee
Saturday at 2:30pm via mobile · Unlike · 2
Nicky Shein မတရား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရပြီး ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ချင်းခံလိုက်ကြရတဲ့ ကျောင်းသားစစ်စစ်တွေရဲ့ သမ်ုင်းကု တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်အောင်နဲ့ သမိုင်းလိမ်ဖို့ကျိုးစားနေသူ သားသတ်သမားများရဲ့ နောက်ကွယ်ကအကြောင်းတစေ့စောင်းကို အများပြည်သူ လေ့လာ အကဲဖြတ်နိုင်အောင် တစိုက်မတ်မတ် တွေ့ဆုံမေးမြန်း တင်ပြပေးနေတဲ့ သတင်းထောက် ဆရာမလေး မေသင်္ကြန်ဟိန်းအား အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုပါကြောင်း မှတ်တမ်း တင်အပ်ပါသည်။
Saturday at 3:59pm · Unlike · 17
Dogyi NB တေါင်နဲ့မြောက်ကဘဝတူတွေဟာအာဏာရှုးတွေရဲ့မြေစာပင်တွေဖြစ်ခဲ့ရပြီဘဝတွေအသက်တွေပေးခဲ့ရတယ်
Saturday at 4:27pm via mobile · Like · 5
Zaw Wint Naing ဒီလို Post မျိုး ကြိုးကြိုးစားစားတင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမ.... မင်းတုန်းမင်းကြီးရဲ့စကား ကို ပြန်ကြားမိတယ် "လူကို ခွေးသတ်လေခြင်း"
Saturday at 7:02pm · Like · 2
Zaw Naing ကျနော်ခဏခဏပြောပါတယ်။ဒီအမှုတင်နိုင်ဘို့ ကူညီပါမယ်။မိသားစုတွေထဲက ကျနော်ကိုဆက်ပါ။ဖေုဘုပ်ပေါ်မှာရေးပြရင်။အရာမရောက်ပါဘူး။ဌေးတင့်ကို ပြောတယ် သူက သူ့ ညီကိုဝိုင်းသနားစေချင်တာထက်မပိုဘူး။ကျနော် ကတရားခွင်တင်စေချင်တယ်။ ဘယ်လို အမှုတင်ရမယ်ဆိုတာပါ ကျနော်မှာ အစီအစဉ်ရှိတယ်။
Saturday at 10:20pm · Like · 3
မိုးကြိုး လျှပ်စီး အသေစောတာပေါ့ ABSDF ကျောင်းသာဆိုတော ကျန်းတဲ ကောင်းတွေ ပါခေါ်သွား၇မှာ ပြည်သူအတွက်အကျိုးမ၇ှိတဲ အလုပ်တွေ လုပ်နေတဲ လူတစ်စု ထက်ပို ပီး မြင်လို မ၇တာ
Sunday at 3:55am · Like
Zawmoehetet Zawmoe စိတ်ဝင်စားပါတယ် မမေ . . .ဆက်လက်စောင့်မျှော်နေပါတယ်. .ကျေးဇူးလဲ တင်နေလျှက်. . . .
Sunday at 6:11am · Like
Mya Hnaung ကျမတို့အတွက်သတင်းဖေါ်ထုတ်တင်ပြပေးတဲ့မေသင်္ကြန်ဟိန်(မြစ်မခ)ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုဌေးနိုင်ရဲ့မိသားစုနဲ့တကွမိခင်ဖြစ်သူကို အမေချင်းကိုယ်ချင်းစာလှကြင်နာသနားလှပါတယ်။
Sunday at 6:39am · Like · 1
Bamar Gyi စိတ်မကောင်းတာတော့ တော်တော်ပါဘဲ...ဒါပေမဲ့ ဗျူးတွေထဲဖတ်၇တာ (ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေ)တချို့ပြောတာတွေ မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်.....ထောက်ပြဝေဖန်လဲကြိုက်ပါ့မလားဘဲ.....စာရေးဆရာမကိုပြောချင်တာကတော့ အသံတွေကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပေးစေချင်ပါဘူး.....တကယ်တရားစွဲဖြစ်ရင်ထောက်ကွက်တွေဖြစ်လာမှာစိုးပါတယ်.....(တရားခံတွေက အမတန်ယုတ်မာပြီး အမတန်ကောက်ကျစ်တယ် လည်တယ်).......
Sunday at 6:55am · Unlike · 4
Wise Guy ကိုဇော်နိုင့်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားပါတယ်။ ဒီစာစုအတွက် မမေကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုဇော်နိုင်လိုအပ်တာ ရှိရင်ကျနော့်ကို ခိုင်းပါခင်ဗျား။ ကျနော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာ အသိပေးပါရစေ ...
Sunday at 7:46am · Like · 1
Min Han အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့ တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုသိဖို့ဘက်ပေါင်းစုံအောင်လေ့လာရလိမ့်မယ်။
Sunday at 8:18am · Like
နိုင် ဦး ကိုဌေးနိုင် မိသားစုအားလုံးနဲ့ထပ်တူ ခံစားရပါတယ်...ကိုဌေးနိုင် ကိုဌေးတင်တို့ ညီအကိုနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့လည်း ခင်မင်ရင်းနှီးပါသည်..သူငယ်ချင်း ကိုဌေးနိုင် အသတ်ခံလိုက်ရတာကိုကြားတော့ အရမ်းအံသြမိပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါသည်..တောတွင်း၌ အသတ်ခံလိုက်ရသော ကိုဌေးနိုင်၏ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကိုလည်း နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ ကိုဌေးနိုင်ရဲ့ မိသားစုအား ကူညီပန့်ပိုးပေးစေပါသည်...မိသားစုအားလုံးကျမ်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ..။
Sunday at 11:10am · Like
Htay Tint Zaw Naing နှင့် ဌေးနိူင် အသတ်ခံရတဲ့ သမိုင်းမှန်ကို ဝိုင်းဝန်းစုံစမ်းပေးသူ အားလုံးကို မိခင်နဲ့မောင်နှမတွေက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ မှာလိုက်ပါတယ် ။ သီးသန့် အကြံပေးချင်တာတွေရှိရင် Htay Naing Facebook massanger ကတဆင့် ပေးပို့ နိုင်ပါတယ် ။
Sunday at 12:06pm · Like · 2
Ashin Nipuna အမှုမှန် ပေါ်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိရင် မိုးသီးဇွန်တို့ ဒီကိစ္စကို တရားဘောင်တွင်းက ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
Sunday at 4:15pm · Like
Arr Gyi မိုးသီးဇွန်မှာ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ပြောကြတာ....အမှန် ပေါ်ပေါက် ဘို့ စစ်ဆေးကြပါ ..။ မိသားစုတွေကလဲတ၇ားခံကို ..တော့ ခွင့် လွတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ထာတော့ ..အမှန်ပါ...။ တ၇ားပြန်စွဲလို့ ၇၇င် ..အမှု ဖွင့် တ၇ားစွဲ ကြပါဗျာ...အချင်းချင်းသတ်ကြတာ...မီးခဲပြာဖုံးတော့ အဖြစ်မခံကြပါနဲ့ ကိုဌေးနိုင်၇ဲ့ မိသားစု များ ခင်ဗျားးးး
Sunday at 5:38pm · Like
Thi Thi Hlaing ကျမလည်း၈၈တုန်းကလှိုင်မြို့နယ်ကျောင်းသားသမဂ်ဂ(၁၁ရပ်ကွက်)မှာလှုပ်ရှားခဲ့သူပါ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကတံတားနီမှာအစာငတ်ခံဆန်ဒပြနေကြတာလေ။
Yesterday at 6:46am · Unlike · 2
by May Thingyan Hein on Monday, October 8, 2012 at 6:53pm ·
အောက်တိုဘာ ၈၊ ရန်ကုန်မြို့။
တကယ်တမ်း သူတို့ နိုင်ငံရေးလုပ်တော့လည်း မေမေ ကျနော်တို့ နေလို့မရတော့ဘူး ဆိုတဲ့ နေ့မှပဲ သိရတော့တယ်။ များသောအားဖြင့် သားကြီးက ခ၀ဲခြံမှာနေတယ်။ သားက အဆောင်မှာနေတယ်။အဲလို နေရင်းနဲ့ ၈၈ ခုနှစ်မှာ အရေးအခင်းကြုံပြီး နိုင်ငံရေးဘက်ကို ရောက်သွားကြတာ။
အဲဒီတုန်းကလည်း သူတို့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ သူတို့လုပ်နေတဲ့အတွက် အမေတယောက်အနေနဲ့ ဘာမှ ပြောခဲ့တာမျိုး ဆိုခဲ့တာမျိုးလည်း မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ရှောင်နေဦးမယ်လို့ ပြောတော့လည်း မတားခဲ့ပါဘူး၊ အဲဒီနေ့ကစပြီး ဒီနေ့ထိ အိမ်ပြန်မလာတော့တာပါပဲ။
တောခိုသွားတော့လည်း သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းတွေဘာတွေက တော်တော်နဲ့ မကြားရဘူး။ တစွန်းတစလောက်ကြားရတာ နယ်စပ်သွားတဲ့ သူတွေဘာတွေက ပြောကြတာ နယ်စပ်မှာ အန်တီ့ သားကြီးကိုတွေ့တယ်ပေါ့၊ အန်တီ့လိုပဲ မှဲ့နဲ့ပေါ့ ပြီးတော့ အဲဒီလမ်းက ပန်းခင်းလမ်း မဟုတ်ဘူး ဘာဘူးပေါ့အဲလို ခက်ခဲတဲ့ လမ်းမျိုး ဆိုတာလောက် ပြောကြတယ်။
နောက် အန်တီ့ကို လှိုင်မြို့နယ် ရဲစခန်းက ခေါ်စစ်တယ်၊ အန်တီ့သားတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိလားတဲ့ မရှိပါဘူး လို့ပြောတော့ ရှိရင် ကျနော်တို့ ဆီကို အကြောင်းကြားပါတဲ့ အဲလို ပြောတော့ အန်တီက ပိုတောင် သိချင်သေးတယ်လို့ အန်တီက မွေးမိခင်ပဲ ပိုသိချင်တာပေါ့ ခုလို ဘာမှ မသိလို့တောင် စိတ်ပူနေရတယ် ပိုသိချင်သေးတယ်လို့ တကယ်လို့ ဆရာတို့ သိရင်လည်း အန်တီကို ပြန်ပြောပါလို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒါက တခါ ရဲစခန်းက ခေါ်မေးတာခံရတာ။
နောက် အန်တီ့အမျိုးသားက ရွှေတောင်မှာ တာဝန်ကျတယ်၊ တာဝန်ကျတော့ကျောင်းပိတ်တော့ အန်တီတို့ အဲဒီကို လိုက်သွားကြတာ။ အဲဒီလို လိုက်သွားတော့ ထောက်လှမ်းရေးက လာတယ်ပေါ့ အန်ကယ့်ကို မေးတာ သားနှစ်ယောက်တောခိုတာ ရောက်နေတယ် ကြားလို့တဲ့..။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်လို့တဲ့ အဲလိုပြောတော့ အန်ကယ်က ကျနော့်သားတွေရှိပါတယ် ဆိုပြီး အိမ်မှာ ရှိတဲ့ ဋ္ဌေးဝင်းတို့ ဋ္ဌေးမြင့်တို့ကို ထုတ်ပြတယ်။ အဲဒါ ကျနော့်သားတွေပဲ့ ဆိုတော့…လာမေးတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးက ဟာ စိတ်မရှိပါနဲ့ ဗိုလ်ကြီးရယ်တဲ့…ကျနော်တို့ကို တိုင်တဲ့ သူ ရှိလို့ပါ ဆိုပြီး ပြန်သွားကြတယ်။
အဲလိုတွေပြီးတော့ဋ္ဌေးနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းကြားရလာရတာ ပိုများလာတယ်။ အဖမ်းခံရတယ်လို့လည်း ကြားတယ်၊ ၀ဲတွေပေါက်နေတယ် ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူးလို့လည်း ကြားရတယ်။ မယုံဘူးပေါ့။ မဟုတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပဲ ထင်နေခဲ့တာ။
အဲဒီမှာ အန်တီသူ့ကို အိပ်မက် မက်လိုက်သေးတယ်။ သားနှစ်ယောက်တောခိုသွားတယ် အိမ်ကနေ ထွက်သွားတယ်ပေါ့ သားအကြီး ကိုဋ္ဌေးတင့်ကို ဘယ်တော့မှ အိမ်မက် မမက်ဘူး။ သူ့ကိုပဲ့ မက်တယ်။ သူ သေပြီဆိုတာကို မသိရခင်ကတည်းက အိမ်မက် မက်မက်နေတာ။
အဲဒါကို အိမ်က သားတွေနဲ့ သမီးတွေကို ပြောရတယ်၊ ထူးဆန်းတယ်လို့ ငါဋ္ဌေးတင့်ကို ဘယ်တော့မှ မမက်ဘူးလို့ ဋ္ဌေးနိုင်ကိုပဲ အိမ်မက် မက်နေတာ ဆန်းတယ်လို့။ အိမ်မက်ထဲမှာ အိမ်ပြန်လာတယ် ပြီးရင် ဘယ်တော့မှလည်း အိမ်ထဲ မ၀င်ဘူးလို့ ဒီအတိုင်းပဲ ပြန်ပြန်ထွက်သွားတယ်လို့။ ဆိုက်ကယ်လေး စီးပြီး ပြန်ထွက်သွားတယ်လို့ အဲလိုပဲ သားငယ်ကို အမြဲမက်တယ်။တောက်လျှောက်ကို မက်နေတာ။
နောက် မှတ်မှတ်ရရ ဘာလဲဆိုတော့ သားတယောက်က အိမ်ရှေ့ကနေ မ၀င်ဘဲနဲ့ အိမ်နောက်ဘေး မီးဖိုချောင်အပေါက်ကနေ ပြေးပြီးတော့ အိမ်ထဲကို ၀င်သွားတာ။ အဲဒီမှာ ချွေးမကလည်း အိမ်မှာ အန်တီက ချွေးမကို မိုးမိုးကျော်ရေ..နင့်ယောင်္ကျားနင့်ကို ပုန်းနေတယ်လို့ ပြောလိုက်သေးတယ်။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ဆိုတော့ မိုးမိုးကျော်က ဟုတ်လားဆိုပြီး ထွက်လာတော့ ဟဲ့..ဟဲ့… မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး အဲဒါ ဋ္ဌေးနိုင် ဋ္ဌေးနိုင်လို့ ပြောလိုက်တယ်…အဲဒီမှာ သားကပြန်ထွက်မသွားဘူး။ အန်တီက အမြဲတမ်း သူ ပြန်ပြန် ထွက်သွားတာကိုပဲ့ တွေ့ရတော့ ဒီတခါ ပြန်ထွက်သွားတာ မတွေ့ရဘူးဆိုပြီး အံ့သြသွားတယ်။
အဲဒါနောက်ဆုံး မက်ပြီး ခုထိ ပြန်မမက်တော့ဘူး။
အမေတယောက်အနေနဲ့ကတော့ သူများတွေ ပြန်လာတဲ့အချိန်ရရင် ငါ့သားတွေလည်း ပြန်လာမှာပဲလို့ မျှော်လင့်တာပဲ။ အဲလို အချိန်မှာ ခုလို သားတယောက် ရက်ရက်စက်စက် အလုပ်ခံရပြီး သေရတယ်ဆိုတာကို အမေတယောက်အနေနဲ့ မကျေနပ်ဘူး။
သူတို့က ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ရင် တခါတည်း ပစ်သတ်လိုက်…အဲလို သေတယ်ဆိုတာက ခုလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းခြင်း ညင်းဆဲပြီး ဝေဒနာတွေခံစားရ၊ ၀ဲတွေပေါက်၊ ရောဂါဝေဒနာရော …အဲလိုမျိုးတွေ ခံစားရပြီး မှ သတ်ပြစ်တာမျိုးကို မခံနိုင်ဘူး။
လူတယောက်ရဲ့ ခံစားမှုထက်ကျော်လွန်ပြီး ခံစားလို့မရဘူးပေါ့ အမေတယောက်အနေနဲ့။
ထောက်လှမ်းရေးလို့ စွပ်စွဲမယ်ဆိုရင် ဟုတ်နိုင် မဟုတ်နိုင် ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် မစဉ်းစားဘဲနဲ့ လုပ်ရသလား၊ ထောက်လှမ်းရေးတယောက်ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ လွယ်တာ မှ မဟုတ်တာ၊ အန်တီတို့သားက လုံးဝ ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ကြောင်း အန်တီကိုယ်တိုင် အသက်နဲ့ လဲပြီး အာမခံတယ်။ တာဝန်ယူတယ်။ သူတို့ရော ထောက်လှမ်းရေးလို့ စွပ်စွဲပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်လို တာဝန်ယူမလဲ။
ထောက်လှမ်းရေးလို့ ၀န်ခံခိုင်းခဲ့တာကလည်း ဘယ်လိုနှက်စက်ခဲ့သလဲ …နှိပ်စက်တဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ၀န်ခံကြမှာပဲ ၊မတရားနှိပ်စက် ငြင်းပမ်းတာကို ခံလိုက်ရလို့သာ ၀န်ခံခဲ့ကြတာလေ။ အဲဒါကို အမှန်လို့ ယူဆလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ သူတို့ သိရမှာပေါ့။
အမေတို့ သိနေတာပဲ မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတွေလည်း ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတယ်၊ သူတို့လည်း ကိုယ့်အသားနာလွန်းလို့ မခံနိုင်ဘူး ပြောမိပြောရာ ပြောကြတာပဲ။ အဲဒီသဘောတွေ။
နောက် အန်တီက ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ တအားခံစားလိုက်ရတယ် သား ဒီလို ဆုံးတာ ပြီးတော့ ဂျာနယ်တွေမှာလည်း မိုးသီးဇွန်တို့က ဋ္ဌေးနိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ကြံပြောကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခံစားရတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် မိုးသီးဇွန်ကို မေးချင်တယ် မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပေါ့။ ငါ့သားကို ငါက ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ကြောင်း တာဝန်ခံတယ် တာဝန်ယူတယ် နင်ကရော ဘယ်လိုတာဝန်ယူသလဲပေါ့၊ မေးလိုက်ချင်တယ်။ လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပေါ့။တကယ့်လို မေးချင်ပါတယ်။
(၃)ဋ္ဌေးတင့်( ဋ္ဌေးနိုင်ရဲ့ အကို)
(ကိုဋ္ဌေးတင့်က ပြည်ပ နိုင်ငံတခုမှာ နေထိုင်နေတဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကိုဋ္ဌေးတင့်ကိုတော့ face to face အင်တာဗျူးခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။
ကျမ မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို Facebook ရဲ့ message ကနေတဆင့်ရေးသားပေးပို့ပြီး မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်)
၁၉၉၉ ခုနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံ International Care မဟာချိုင်ဒေသ မှာလုပ်စဉ်က ဖုန်းအလကားရလို့တကြိမ်ဆက်ဖူးပါတယ် ။ အဖေလေဖြတ်နေတဲ့ ကာလဆိုတော့ ဌေးနိုင်ကို ပျောက်နေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။ တကယ်လည်း သူ့ရဲ့ သတင်းက စုံစမ်းလို့ မရလောက်အောင်ကို ပျောက်နေခဲ့တာပါ။
ဒါနဲ့ ၂၀၀၅ နယ်သာလန်ကို ရောက်တော့ သမိုင်းချည်စက်က လုံခြုံရေးမှုး ဦးကျော်ခင်သား ကိုကျော်လွင်စိုးကတဆင့် ပြောင်းသွားတဲ့ အိမ်ကိုဆက်သွယ်ပေးလို့အမေတို့ နဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်ရပါတယ် ။အဲဒီတုန်းကလည်း သေသေချာချာ မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ကိုကျော်လွင်စိုးဆိုတာ ABSDF မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပြီး တိုက်ပွဲတခုမှာ ကျည်ဖူးက ပုခုံးညှပ်ရိုးက ဝင်သွားပြီး လည်ပင်ရိုးအားရုံကြောဘေးမှာ ကပ်နေလို့လက်တဖက် မသန်တော့တဲ့ လှိုင်မြို့ နယ်က ၈၈ ကျောင်းသား တယောက်ပါ။
ABSDF တပ်ဖွဲ့ ဝင်ဟောင်းတွေ ကျွန်တော့ကို ကိုဌေးနိုင်ရဲ့တောတွင်းသမိုင်း လုပ်ကြံ ဇတ်လမ်းပေါင်းစုံ ပြန်ပြောကြပါတယ် ။ ကိုဌေးနိုင် ကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာ တခုမှ မရှိပါဖူး ။ နိူင်ငံတကာရောက် အချို့ တပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေ အားလုံးက ကိုဌေးနိုင်လို လူတွေ သေတာက ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ဝါဒဖြန့် ချီနေခဲ့ကြပါတယ် ။
ကျနော် နားမလည်ခဲ့ဖူး ။ ၂၀၁၂ ရောက်မှ ကျနော်တို့ ညီအကို ၂ ယောက်ကို ယုတ်မာပက်စက်တဲ့ အုပ်စုကြီးက အကောက်ကြံခဲ့တာသိရတယ် ။
တိုင်းပြည်အတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ရဲဘော်သုံးချိတ်တို့ ကို နမူနာယူပြီး အသက်စွန့် ဖို့ သွားတဲ့ မြန်မာပြည်ထဲက ၈၈ ကျောင်းသား မိသားစုတွေရဲ့ အတွင်းပီတိ စိတ်ခွန်အားတွေကို ကို မဖျက်စီးချင်ဖူးလေ ။
ဒီအတွင်းမှာ နောက်ဆုံး မိုးသီးဇွန် ဘန်ကောက်ရုံးမှာ တာဝန်ယူတယ်ပြောခဲ့တဲ့ ကိုကိုဦး ( အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး ) နဲ့ ကိုသန်းဝင်း ( အတွင်းရေးမှုး ) ကို အမေရိကန်မှာ လိုက်လံစုံစမ်း နေရင်း ၁၀ နှစ်လောက် အချိန်ယူရတယ် ။ ။
အမေ့ကိုတော့ တောထဲမှာ သေဆုံးပြီ ။လူမှားပြီး အသတ်ခံရတယ် ။ မြောင်းထဲရောက်သွားပြီလို့အဖြေပေးခဲ့ပါတယ် ။
မိဘ မောင်နှမတွေက တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ သူတွေဆိုတဲ့ပီတိ စိတ်ခွန်အား မျှော်လင့်ချက်ကို အဲဒီတုံးက မပျက်စီးစေချင်ဖူး ။
အဲဒီကိစ္စကို ပြန်ပြောရရင်တော့ ၁၉၉၂ ရောက်တော့ ဗိုလိချုပ်မြ အမျိုးလို့ ပြောတဲ့ ကိုတော်မီ ကိုစမစ် ဆီမှာ သင်ကြားလာခဲ့တဲ့ ရွေရည်စိမ် ခါးပတ်ခေါင်း ကြယ်သီး နားဆွဲ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပညာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်နေပါပြီ ။ချွန်ဖုံး စခန်းပျက်ပြီး ဒုက္ခရောက်လာတဲ့ ဘန်ကောက် မြန်မာကျောင်းသား အစုလေးကို အကူအညီပေးနေတဲ့ချင်းမိုင်သူ ဖီးလတ်ဆိုသူ ရဲ့ရာဘာရောင်စုံ ဖိနပ်လုပ်ငန်းက ရှုံးသွားပါတယ် ။ မြန်မာအလုပ်သမားတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေ ကစင့်ကလျှား ဖြစ်မှာစိုးလို့ခဲကြို ပြီး ပစ္စည်းအချောထုတ်တဲ့စက်တွေ အကြွေးနဲ့ ဝယ်ပေးပြီး စက်ရုံဆောက် ဈေးကွက်ရှာ နေပါတယ် ။
လွတ်လပ်တဲ့ ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စက်ရုံအသစ်တည်တယ်ဆိုတော့ အင်မတန်ခက်ခဲ့ပါတယ် ။ နေ့ ရော ညရော မအိပ်ရပါဖူး
တရက်က ကျွန်တော် စက်ရုံထွက်ပစ္စည်းတွေ သွားပို့ပြီး အပြန် အနူစာဝါရီ အဝိုင်းဘေးက မလေးရှား ဒန်ပေါက်ဆိုင်မှာ ကိုကျော်ကျော်(မြောက်ပိုင်းကိုယ်စားလှယ်) ကို NCGUB က ဝန်ကြီးတယောက်နဲ့ တွေ့ လို့စကားစမြည်ပြောဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ် ။ နောက်သိပ် မကြာပါဖူး ။ သူငယ်ချင်းတယောက်က လာပြောပါတယ် ။ ကိုဌေးနိူင် အဖမ်းခံနေရပြီတဲ့ ။
ကျနော့် နားကို ကျွန်တော် မယုံနိူင်အောင်ဖြစ်သွားတယ် ။
ဌေးနိူင် ပင်လယ်ပြင် စစ်ဆင်ရေးက အပြန် ဘန်ကောက်ကို လာတော့ ကျွန်တော်က တရုပ် စက်ရုံမှာ မန်နေဂျာ လုပ်နေတာပါ ။ ကျွန်တော် စုထားတဲ့ ဘတ်ငွေတွေ အားလုံးပေးလိုက်ပါတယ် ကိုဌေးနိုင်က ကိုကြီး ကျွန်တော်ပြန်ထက်လာခဲ့မယ် ။ ထောက်လှမ်းရေး လက်မှတ် အသစ်လုပ်နေတာ မပြီးသေးဖူး ပြီးရင် ဘန်ကောက်မှာ အကိုကြီးနဲ့အကြာကြီးလာနေမယ်လို့ ပြောသွားပါတယ် ။ ဦးစင်ကြယ် ဘန်ကောက်မှာ နေတုံးက ယာယီ ကျောင်းသားတွေ အတွက် အပေါ်ထပ်မှာ ကျွန်တော်ရယ် သန်းဝင်းရယ် မိုးသီးရယ် အတူတူ အိပ်ခဲ့ကြတာပါ ။ မိုးသီးခိုင်းတဲ့ကျောင်းသားတပ်အတွက် အလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ် ။မိုးသီးဇွန်က ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ ဝါသနာပါလို့ရုပ်ရှင်ရုံလိုက်ပို့ ပေးခဲ့ဖူးတယ် ။
သတင်းကြားရတော့ ကျနော်ချက်ခြင်းဘဲ ဘန်ကောက်က ABSDF ရုံး သစ်ကို လိုက်သွားတယ် ။ မိုးသီးဇွန် သတင်းပျောက်နေတယ် ။ ကိုသန်းဝင်း ကိုကိုဦးတို့ နဲ့ တွေ့ ပါတယ် ။ ခဏ ခဏ သွားမေးပါတယ် ။
ကိုကိုဦးက ကိုဌေးနိုင်ကို အစည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လွတ်ပေးဖို့ကြေးနန်းရိုက်လိုက်ပြီတဲ့ ။
အဲဒီအချိန်က KNU ဘန်ကောက်ရုံးကို ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောရပါတယ် ။ KNU အစီအစဉ်နဲ့ကျောင်းသားတပ်ကို ကြေးနန်းပို့ ရပါတယ် ။ ကျွန်တော်ရှေ့ မှာ ကိုကိုဦးက KNU ကို ဖုန်းဆက်ပြီးကြေးနန်းရောက်မရောက် ကျွန်တော်ရှေ့ မှာ ဖုန်းဆက်ပြီး မေးပြပါတယ် ။
ကျနော်တို့ စုပေါင်းတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ကျွန်တော်တို့မှ မယုံကြည်ရင် ဘယ်သူယုံကြမလဲဗျာ ။ နောက်မှ သိရတာက ဝင်းနိုင်ဦး ( ရင်မောင် BBC ) က ကြေးနန်းကို ဆက်သွယ်ရေး တပ်စုဆီမရောက်အောင် ဖြတ်ပြီး ယူသွားတယ်တဲ့ ။ အဲဒီအချိန်မှာ မိုးသီးဇွန်နဲ့ ကျောင်းသားအချို့ ကို ဗိုလ်ချုပ်မြ အမိန့် နဲ့ ဖမ်းထားပြီလေ ။ ကရင်ဌါနချုပ်က အောက်ခြေ ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ တွေ မိုးသီးဇွန်အဖမ်းခံရတာ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို လွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မသိကြပါဖူး။
You, Win Chit Khine, ဘရာဇီး ငှက်ရိုး, Soe Lynn and9others like this.
Khin Yu Yu အော်ဖြစ်ရလေ။ လွှတ်ဖို့ ပြောတဲ့ကြေးနန်းကို ချက်ချင်းမပေးပဲ ထားတာ ဘာလို့ လဲ။ အဖမ်းခံထားရတဲ့သူဟာ သူ့ အမျိုးဆို ဒီလိုလုပ်မလား။
by May Thingyan Hein on Tuesday, October 9, 2012 at 7:58am ·
အောက်တိုဘာ ၉၊ ရန်ကုန်မြို့။
ကျနော် မိုးသီးဇွန်ကို ယုံကြည်မိခဲ့တယ် ။
အဲဒါဟာကျနော့်ကိုယ် ကျနော် တသက်လုံး မိကိုယ်ကို နောင်တရစေမဲ့ယုံကြည်မှု အမှားတွေကို အချိန်ကာလာတာနဲ့ အမျှ သိလာရတယ် ။ ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ နောင်တ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးကို မိုးသီးဇွန်ကို ယုံကြည်ခဲ့သူတွေ ခံစားရမယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ် ။
ဒီနေရာမှ ကျနော် တခုလောက် ဖြတ်ပြီး ပြောချင်တယ်။ ကျနော်တို့ ညီအကို တောခိုခဲ့ကြတာက မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ခဏ ရှောင်နေခဲ့ကြတာပါ။ ခဏရှောင်နေပြီးရင် အိမ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ရည်ရွယ်ချက် ရှိခဲ့ကြတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ရန်ကုန်မှာ အာဏာသိမ်းပြီး နောက်တနေ့ လည်လောက်မှာ လှိုင်မြို့ နယ်လမ်းမကြီး တလျှောက် လူသေအလောင်းတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကို ဆင်ရေတွင်းနောက်ဖက်က ပတ်ပြီးသွားလိုက်ကြတယ် ။
အမေစုကို ခြံဝနားမှာ တွေ့ လိုက်ရတယ် ။ အမေစုက မြို့ ထဲက အခြေအနေတွေ မေးတော့ ပြောပြလိုက်တယ် ။
အခြေအနေမကောင်းရင် ထိုင်းနိုင်ငံကို ရှောင်မယ်လို့အသိပေးလိုက်တယ် ။
အမေစုက ဘန်ကောက်အထိရောက်အောင်သွားပါ ။ ကိုမျိုးသိမ်းကိုတွေ့ အောင်ရှာပြီး အကူအညီတောင်းပါလို့မှာလိုက်တယ် ။ အပြန်လမ်းမှာ ကျောင်းသားတွေ စုနေတဲ့ ၁၃ ရပ်ကွက်ထဲက ဘုန်းကြီးကျောင်းကို တစ်ချက်ဝင်လိုက်တော့ နယ်စပ်ကိုသွားဖို့အမာခံကျောင်းသားတွေ ပြင်ဆင်ပြီးပြီ ။ ထောက်လှမ်းရေးတွေ လိုက်ဖမ်းနေကြပြီလို့ ပြောကြတယ် ။အဲဒါနဲ့ အိမ်နားဝန်းကျင် အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး အိမ်ထဲဝင်ပြီး အဝတ်အစားအပိုယူလိုက်တယ် ။ အမေ့ကို ရှောင်နေမှ ဖြစ်တော့မယ် အမေ ခဏဘဲလို့ ပြောလိုက်တယ် ။
ကျနော် ထင်ထားတာက ၃ လ လောက်ဘဲကြာမယ်ထင်ထားတာ ။ တကယ်တော့ ၃ လလောက်ဆိုတာ နှစ် ၂၀ ကျော် ကြာတာတောင် အိမ်မပြန်နိူင်သေးတဲ့ ဘဝရောက်သွားတယ်။
အမေက သားကြီးတယောက်ထဲ မသွားနဲ့သားငယ်ကို အဖေါ်ခေါ်သွားဆိုပြီး အိပ်ယာထဲက အိပ်ပျော်နေတဲ့ ဌေးနိုင်ကို သွားနိူးလိုက်တယ် ။
အဲဒီနေ့က အိပ်ရာထဲကနေ နိုးထလာတဲ့ ဌေးနိုင်က ကိုကြီးက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမဟုတ်ဘူး ။ အန္တရာယ်ရှိတယ် ။ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း မောင်မောင်ကျော် သွားနှင့်နေပြီ။ ကျွန်တော်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အဝတ်တထည် ကိုယ်တခုနဲ့လိုက်လာခဲ့ရှာတယ်။
ကျနော်တို့ပဲခူး အထိကတော့တစုတည်းသွားကြတာပေါ့ ။ ပဲခူးကနေ ဖားအံကို တက်ကြတဲ့အခါကြတော့ ကား၂ စီးကွဲသွားတယ် ။စုံရပ်က မောင်မောင်ကျော်တို့ နဲ့ချိန်းထားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်တော်ဘုန်းကြီးကျောင်း ပေါ့ ။ ကျနော်နဲ့ဌေးနိုင်တို့ က တအုပ်စု ။ ငြိမ်းချမ်းတို့ က တအုပ်စု ကွဲသွားကြတယ် ။
ဖားအံက အထွက် စစ်ဆေးရေးဂိတ်အဝင်မှာ ကားသမားက ရပ်ပြီး တောလမ်းနဲ့ လမ်းလျှောက်ဖို့ 
ပြောတယ် ။ ကျနော်တို့ ရင်စို့ တောင်တွေ တက်ကြရတာပေါ့ .။ မြင်မြင့်စန်းဆို မောပန်းလွန်းလို့သတိပါလစ်တယ် ။ ကိုဌေးနိုင်က အားကစား သမားဆိုတော့ ထမ်းရတာပေါ့ ။
တောင်တက်ထားကြ ရှေ့ မှာ အဆင်းရှိတယ် ဆိုပြီး တက်လိုက်ရတာ ၂ ရက်လောက်ကြာသွားတာလဲရှိတယ် ။ ရွာတွေက ကျိုးဖိုးလေးတွေဆိုပြီး ( ကျောင်းသား) ကျနော်တို့ကို ထမင်းကျွေးတယ် ။ ခရီးတလျှောက်လုံး ကိုဌေးနိုင်က စိတ်ဓါတ်ခွန်အားပေးပြီး ဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။
KNU နယ်မြေထဲဝင်တော့ ဒေါက်တာ စင်သီယာတို့ အုပ်စုနဲ့ တွေ့ ပြီး မကြာခင် ဗိုလ်ေ၈ျာ်နီတို့ လာကြိုတယ် ။
တပတ်လောက်ကြာတော့ KNU စခန်းက ဝမ်ခကို စရောက်တယ် ။
နောက်တော့ KNU က ဗိုလ်လှဝေက ကျောင်းသားတွေ စုစည်းပေးထားတဲ့သီဘောပိုး စခန်းကိုပို့ ပေးလိုက်တယ် ။
သီဘောပိုးဆိုတာ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်ရွာကြီးတခုပါ ။ မှောင်ခိုကုန်သည်တွေ ခတ္တတည်းခိုရာ အရပ်ဖြစ်တယ် ။ အိမ်ငယ်လေးတွေ မှာ ပြည်တွင်းက လာကြတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ အုပ်စုလိုက် ပြွတ်ပြီးနေကြရတယ် ။
ကျနော်နဲ့ ပါလာတာက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားငယ်တွေများတယ် ။ လူငယ်တွေ ဘယ်လောက်များလဲဆိုရင်မနက် ၈ နာရီက တန်းစီတာ နေ့ လည် ၁ နာရီလောက်မှ ထမင်းစားဖို့အလှည့်ရောက်တယ် ။
အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ တွေ ဆုံးဖြတ်ချက် တခုချတယ် ။ မယ်တော် ဖုန်းကြီးကျောင်းကို ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့သွားဖို့။
တော်တော်ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်ပါလား ။ ကရင်ဂိတ်ကိုဖြတ်ဖို့KNU ထောက်ခံစာ လိုတယ် ။ ထိုင်းဂိတ်က စစ်ဆေးရင်ပြဖို့KNU လက်မှတ်လိုတယ် ။ လူတိုင်းကို မပေးဖူး ။
ဈေးဝယ်သွားတဲ့လူတွေကတော့လွယ်တယ် ။ ကျွန်တော်တို့ အုပ်စု ခရီးလမ်း အခြေအနေ ထိုင်းစကား တလုံး နှစ်လုံးလေ့လာရတယ် ။ နောက်ဆုံး ရတဲ့ အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းပြီး ကျနော့်ကို ထိုင်းနိုင်ငံထဲဝင်ဖို့ တာဝန်ပေးလိုက်တယ် ။ တိုင်းပြည်အတွက်ဘဲဗျာ ။ ဗိုလ်ချုပ်တောင် တရုပ်ပြည်ကတဆင့် ၈ျပန်ရောက်သေးတာဘဲ ။
ထိုင်းနိုင်ငံထဲ ဈေးဝယ်ပြီး ပြန်လာတဲ့ လူတယောက်ဆီက KNU လက်မှတ်ကို မမြင်ဖူးလို့ ကြည့်ပါရစေဆိုပြီး တောင်းထားလိုက်တယ် ။
မဆလခေတ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုတာ ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက် အလွန်များသားဘဲ ။ ရလာတဲ့ လက်မှတ်ကို မနက်စောစော နှင်းရည်နဲ့ ဖျက်တယ် ။ ပန်းချီဆရာသား ရဲမင်းက လက်ရေးတုနဲ့ ရက်စွဲပြင်တယ် ။ ငါးသေတ္တာ တဘူးကို လူတအုပ် ၂ ရက် မျှဝေစားသောက်ရတဲ့အခြေအနေပါ ။ ကျနော့်ရဲ့ ရွေလက်စွပ်ကို ဌေးနိုင်ကို ချွတ်ပေးလိုက်တယ် ။ ကျနော်တို့အဖွဲ့ ကို ဌေးနိူင်လက်ထဲ အပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့။
အဲဒီနောက်တော့ရ မယ်တော်ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဘတ်စကားနဲ့ လမ်းညွန် အသံအတိုင်း ရောက်သွားတယ် ။ ငြိမ်းချမ်းတို့ အုပ်စုနဲ့ ပြန်တွေ့ တယ် ။ မောင်မောင်ကျော်ရောက်လာတယ် ။ ရှေ့ ရေး အတွက် တိုင်ပင်ကြတာပေါ့ ။ ၂ ညဘဲအိပ်ရသေးတယ် ။
ထိုင်းပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ က နံနက် ၇နာရီလောက် မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဝိုင်းပြီး လူတွေ ဖမ်းပါတော့တယ် ။ ကျနော်က အိမ်သာထဲမှာ ဆိုတော့ လွတ်သွားတာပေါ့ ။ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိလို့ကြောင်ပြီး ရပ်ကြည့်နေတုံး ဖမ်းထားတဲ့ကျောင်းသားတွေကို အချုပ်ကားတွေပေါ်တင်ပြီး မောင်းထွက်သွားပါလေရောဗျာ ။ ထိုင်းစကားလဲ မတတ် ။ ဘယ်မှလဲမသွားတတ်တာနဲ့လာတဲ့ လမ်းအတိုင်း မြန်မာပြည်နယ်စပ်ဖက်ကို လမ်းလျှောက်ပြန်ပေါ့ဗျာ ။
အဲဒီမှာ နေကလည်းပူ ။ ရေကလည်းဆာ ။စိတ်ညစ်ပြီး စိတ်ဓါတ်တွေကျနဲ့ ခေါင်းငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက်နဲ့သွားနေတုန်းမှာ ကျနော့်နောက်ကနေ ဟိုင်းလက်နောက်ပွင့် အနီးတစီး ထိုးရပ်လိုက်တယ် ။
ကားပေါ်က လူကြီးတယောက်က “ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲက ပုလိပ်ကားတွေ တွေ့ တယ် ။ ဘာဖြစ်တာလဲ“ တဲ့ မြန်မာလို ပီပီသသကြီးနဲ့မေးလာတယ်။
ကျောင်းသားတွေကို ထိုင်းပုလိပ်ဝင်ဖမ်းသွားတယ် လို့ ကျနော်က ပြန်ဖြေတော့ အဲဒီလူကြီးက မင်းကကောလို့ ရှာရှည်ပြီးလာမေးပြန်တယ် ။
စိတ်ညစ်နေတုန်း ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့တော်လှန်ရေး လုပ်မလို့ ဗျ လို့ ဘုဂလန့် ဖြေလိုက်တယ် ။
သူက …ဟာ ဒါဆို အတော်ဘဲဆိုပြီး ငါတို့ လဲတော်လှန်ရေး လုပ်မလို့လိုက်မလားဆိုတော့ ။ လိုက်မယ် ဆိုပြီး ကားပေါ်တက်လိုက်သွားလိုက်တာ ။
တညလုံးလုံး မောင်းလိုက်တာ မဲ့အောင်ဆောင် ရောက်သွားတယ် ။ နောက်တော့ ကရင်နီလို ခေါ်တဲ့ ဟွေစေတီကျောင်းသား စခန်းကိုရောက်သွားတယ် ။ စောင်းဆရာ ကိုနေဝါတို့ အုပ်စုဖြစ်နေတာကိုး ။
၁၉၈၈ နိုဝင်ဘာလမှာ KNPP ပါတီက ကျွန်တော့ကို ဟွေစေတီ ကျောင်းသား ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် KNU နယ်မြေက အစည်းအဝေးကို လွတ်လိုက်တယ် ။ အစည်းအဝေးပြီးတော့
ကျနော်ညီ ရှိတဲ့ သီဘောပိုးကို လိုက်စုံစမ်းတော့ တပ်ရင်း ၂၀၅ ဖြစ်လာမဲ့ ကျောင်းသားစခန်းမှာ သွားတွေ့ တယ် ။
ကိုဌေးနိုင်က တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးဖြစ်နေပြီ ။ ညီအကို ၂ယောက် ဆုံကြတော့ ဝမ်းသာအားရပေါ့ဗျာ ။ ကျနော် ထိုင်းထဲကို ဝင်သွားပြီး တခြားကျောင်းသားတွေ အဖမ်းခံရပြီး ပြန်ပို့ တဲ့ အထဲမှာ ကျနော်ပြန်ပါမလာဖူးလေ ။ တခြား အဖွဲ့ ဝင်တွေက ဘုရားသုံးဆူ စခန်းပြောင်းတာ လိုက်သွားကြတယ် ။ ဌေးနိူင် ဝင်းဦး အေးသိန်းထွေး ရဲမင်း တို့ ကကျွန်တော့ကို စောင့်နေကြတယ် ။
ကျနော်က ကရင်နီ ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်လာတာဆို စခန်းပြန်ရတာပေါ့ ။
ကျောင်းသားတပ်တော် ၃၀၃ အဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့ စည်းရတာပေါ့ ။ တော်လှန်ရေး လုပ်နေကြတာဘဲ ။ ကျနော်တို့ရ ညီအကိုလည်း အခြေအနေပေးရင် တွေ့ ကြမယ်ပေါ့ ။
၁၉၈၉ ဧပြီလမှာ KNU ဌာချုပ်ကို သင်တန်းတက်ဖို့ရှေ့ တန်းကို ကြေးနန်းဝင်လာတယ် ။ ကျနော်လည်း ရှေ့ တန်းက ၃၀၃ ကျောင်းသား တပ်တွေ စစ်ဆေးပြီး KNU ဌါနချုပ်ကို သတင်းပို့ ပြီး ( ပြည်တွင်း ခြင်္သေ့ စစ်ဆင်ရေး ) အထူးသင်တန်းတက်ရတယ် ။
သင်တန်းမှာ စီမံချက်ရေးဆွဲရေး ဘာသာရပ်အတွက် ဆုရတယ် ။ဒီအတွက် ကျောင်းသားတပ်မတော် ဌာနချုပ်ရှိတဲ့ (ဝလေ စခန်း) ကို တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ အမိန့် ကျတယ် ။
ကိုဌေးနိူင်ကို အတွင်းရေးမှုး စည်းကမ်း ထိမ်းသိမ်းရေး အဖြစ် ပြန်ဆုံကြတယ် ။ နောက်တော့ ဝလေ စခန်းကျသွားတယ် ။ဗဟိုကော်မီတီက မဲဆောက်မှာ ရုံးဖွင့်တော့ ညီအကို ၂ ယောက် အတူတူပြန်ဆုံကြတယ် ။ ကျနော်က ဖလူးဝင်လိုက် ဝမ်ခ ဝင်လိုက်နဲ ပေါ့ ။့ညီအကို ၂ယောက် ဒုတိယ အကြိမ် ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရွေးကြတော့ ကျနော် ကရင်နီမပြန်တော့ဖူး ။
သန်းဝင်း ၊ဌေးနိူင် နဲ့ကျနော်တို့ အုပ်စုတွေကလည်း လူ့ ဘောင်သစ် ဥက္ကဌ အရှိန်နဲ့မိုးသီးကို ဥက္ကဌတင်ပေးလိုက်တယ် ။
ညီအကို ၂ယောက် အတူတူနေဖြစ်အောင် သန်းဝင်း အခြေစိုက်တဲ့ မိုးကဲစခန်း ၂၀၆ ကို အတူတူ စာရင်းရွေ့ ကြတယ် ။ အဲဒီတုံးက တပ်ရင်းမှုး သန်းနိုင်နဲ့ဦးမျိုးချစ်တို့ ပေါ့ .။
ဖလူးစခန်းလဲ ဆက်ကြသွားတော့ ၂၀၆ တပ်ရင်း တခုလုံး ကျောက်ခက်စခန်းကိုရွေ့ ကြရတာပေါ့ ။ ကျွန်တော်က လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေ ရှာဖို့ မဲဆောက် မှာ ကျန်ခဲ့ရတယ် ။နောက်တော့ ဌေးနိုင်တို့ သန်းဝင်းတို့ က ဝင်းကရှေ့ တန်း စခန်းကို သွားကြပြီ ။
မိုးကဲစခန်းနားက သစ်စက်မှာ ဗကသ က ကိုသူရိန်နဲ့ တွေ့ တယ် ။ ပြည်တွင်းပြန်ဝင်ဖို့ကိုဌေးတင့် အကူအညီလိုတယ် ။ ဘန်ကောက်ကို ငွေတက်ယူရမယ် ။
ဦးတင်မြင့်ဦးတို့ အုပ်စုဆီမှာတဲ့ ။ ။ အရက်ဖြူတပိုင်းသောက် ။ ကျန်တဲ့ တပိုင်းကို ခေါင်းပေါ်က လောင်းချပြီး ဘန်ကောက် မဲဆောက် ကားပေါ်က မူးပြီးလိုက်သွားလိုက်တယ် ။ ကိုသူရိန်က ထောက်လှမ်းရေးက လက်မှတ်ရှိတော့ ရဲမကြောက်ရဖူးလေ ။
ကိုသောင်းဝင်းတို့ အိမ်ရောက်သွားတယ် ။ ဥိးတင်မြင့်ဦးတို့ ဆီက အကူအညီ ငွေကြေး ပလုံဖြစ်သွားတယ် ။ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်လို့ ဘုရားကျောင်းတွေလိုက်ပြီး အကူအညီတောင်းရတယ် ။ ၄ ရက်ကျော် အိမ်အပြန် ဘယ်သူမှ မရှိတော့ဖူး ။ အနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာမှ သိရတာ အဲဒီအိမ်ကို နေ့ ခင်းက ရဲဝင်ဖမ်းသွားလို့အားလုံးပါသွားတယ်တဲ့ ။
စနန်းမလွမ်ကွင်း မှာ ထမင်းငတ်ပြီး ၂ ရက်လောက် တော်တော် ဒုက္ခရောက်သွားတယ် ။
နောက်တော့ ဝရဇိမ်စာစောင်ဖြစ်လာမဲ့အသကကျောင်းသားငယ်တွေ နေတဲ့ အေပက်နောက်က အိမ်ကိုရောက်သွားတယ် ။ ထိုင်းစကားသင် ။ ယူအန်လျောက်ရင်း ရဲမင်းနဲ့ ပြန်တွေ့ တယ် ။ နောက်တော့ KNU အဖွဲ့ နဲ့ ပြန်ချိတ်မိပြီး ခါးပတ်ခေါင်း ဆွဲကြိုး ရွေရည်စိမ်လုပ်ငန်း သင်ကြတယ် ။
စာရေးဆရာ မောင်စင်ကြယ် အိမ်မှာ ABSDF ရုံး ဘန်ကောက် မှာ လာဖွင့်တယ် ။ ဌေးနိုင်နဲ့ ပြန်တွေ့ တယ် ။ ဌေးနိုင် ဘန်ကောက်ကို ၂ ကြိမ်တက်လာတယ် ။
အမှန်တရားကို ဦးဆောင်နေတဲ့ တရားသူကြီးက အချိန် အတိအကျ နဲ့ စီရင်ချက်ချဖို့သက်သေလုပ်ဖို့ကျွန်တော့ အသက်ကို လွတ်ထားပေးလားအသိပါဖူးဗျာ။
ကျနော် ဆိုတဲ့ ကောင်က တောထဲမှာ တိုက်ပွဲတွေမှာ ကျည်ဆံက ဗုံးဒဏ်က လွတ်လာခဲ့တယ် ။
ဌေးနိုင် အဖမ်းခံရစဉ်ကလည်း ထ္မင်းငတ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေ မျက်နှာနဲ့ကိုကိုဦး စကားယုံခဲ့တယ် ။ကျနော် တောထဲပြန်ဆင်းရင်လဲ အသတ်ခံရမှာဘဲ ။
ဌေးနိုင်ကို ကယ်ဖို့ ဆင်းသွားတဲ့ လှဝင်းလဲ အသတ်ခံလိုက်ရတယ်လေ ။
မဟာချိုင် အဝေးပြေးကားလမ်းမကြီး မှာ ၁၀ ဘီးကား ၂ ခါ အတိုက်ခံရတယ် ။မောင်းနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေ ကြေမွ စုတ်ပြတ်သွားတယ် ။
တောင်ပိုင်းမှာ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ABSDF ကျောင်းသားရဲဘော် ဋ္ဌေးနိုင် မိသားစုရဲ့…(၄)
by May Thingyan Hein on Thursday, October 11, 2012 at 7:32am ·
အောက်တိုဘာ ၁၁၊ ရန်ကုန်မြို့။
ကျနော်ပြောဖို့ကျန်ခဲ့တာက ထိုင်းဖက်ကမ်းက မယ်တော်ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားတော့ ကိုဌေးနိုင်တို့ကရင်နယ်မြေ သေဘောဘိုးရွာ မှာကျန်ခဲ့တယ်လေ ။ အဲဒီမှာ အစအဆုံး သမိုင်းအတိအကျသိတဲ့လူရှိတယ် ။ ကျနော်သိသလောက် KNU က ကရင်ရွာထဲကနေပြီး ကျောင်းသားတွေ အတွက် စခန်းနယ်မြေပေးတယ်
ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ ဆန္ဒမရှိတော့တဲ့သူတွေကို မွန်နယ်မြေက ဘုရားသုံးဆူ ကျောင်းသားစခန်းကို ပို့ ပေးတယ် ။
နောက်တခုက ၁၉၈၈ မယ်တော် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မောင်မောင်ကျော် အဖေ ဂန္တဝင် မောင်ဝိုင်းပါလာတယ် ။ မောင်မောင်ကျော်ကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ချာပလစ်အဖွဲ့ က ကူညီတယ်ဆိုတာ အကျယ်ချုပ်လိုဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာ နှစ် ၂၀ ကျော်မှ သုံးသပ်မိတယ် ။ မယ်တော် အစည်းအဝေးမှာ အားလုံးဆုံးဖြတ်တာ အလုပ်သမား ။ လယ်သမား ကျောင်းသား ဆိုတဲ့ အခြေခံ ၃ ဖွဲ့ နဲ့တည်ဆောက်ဖို့ သဘောတူခဲ့ကြတာ ။ KNU ကလုံခြုံရေး အတွက် မြန်မာ တစုထဲ နေခွင့်ပေးလိုက်တယ် ။
အတွေးအခေါ်မတူတဲ့ လူတွေ စုလိုက်တော့ ပြဿနာက စတော့တာပေါ့ ။
ပြီးတော့ကိုဋ္ဌေးနိုင်ကို ကယ်ဖို့ ထွက်သွားတဲ့ကိုလှဝင်း ဘာကြောင့် ဘယ်လို သေဆုံးသွားရတာလဲ။ သူ့ကို ဘယ်သူ သတ်လိုက်တာလဲဆိုတာကတော့ဘန်ကောက်ရောက်နေတဲ့ ၁၉၈၈ မြန်မာကျောင်းသားတွေ သမိုင်းကိုပါ သိဖို့ လိုပါတယ် ။
၁၉၈၉ မှာ ဒညတ ( ဦးနုသား ဦးအောင် ထောက်ပံ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ ) ဗိုလိမှုးကြီးစိန်မြ ဦးစီးတယ် )။ မြန်မာပြည်အတွက် ။ ၈၈မှာ ဘဘ ဦးနုက ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး ပါတီပြန်ထောင်တယ် ။ နေဝင်း ဆင်းရင် ၁၉၆၂က ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုက ယာယီအုပ်ချုပ်မယ်ပေါ့ ။ ပညာတတ်လူငယ်တွေနဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့ စည်းကြတယ် ဆေးတက္ကသိုလ်မှာ ကြီး ၅ ကြီးစေ့စပ်နေတဲ့ အချိန်ပေါ့ ။ အာဏာသိမ်းလိုက်တော့ ဒီငြိမ်းက တောထဲကိုရောကိတော့ ဒီငြိမ်းတပ် ဖြစ်သွားတာပေါ့ ။ ။ ကုသိုလ်ကံပေါ့လေ ။
လေမုန်းတိုင်း ကျပြီး ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ဒုက္ခရောက်ကုန်တယ် ။ ဦးအောင်က ဘန်ကောက်မှာ ရှိနေတော့ သူ့ လူတွေကို ဆွဲတင်ရတာပေါဗျာ ။ ABSDF စဖွဲ့ ကာစမှာ လူငယ်လေးတွေ အချို့ က အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ မနေတတ် . စားစရာမရှိ ဆိုတော့ နယ်စပ်မြို့ တွေက တဆင့် ဘန်ကောက်သို့ ဘဲပေါ့ ။ နောက်တခါ နယ်စပ်စခန်းတွေကနေပြီး ကုန်သည်တွေနဲ့ ထိုင်းကိုဝင်လာတယ် ။ ထိုင်းက တက္ကသိုလ်ဆရာတွေက ငယ်တဲ့ကျောင်းသားတွေ ခေါ်လာတယ် ။
UNHCR မြန်မာဌါနကိုလည်း ဆောင်ဆစ်ဆိုတဲ့ ထိုင်းလူမျိုးနဲ့ စတင်ဖွဲ့ စည်းပေးပြီး နယ်စပ်တွေကို တောက်လျှောက် ကူညီပြီး ဘန်ကောက်ကို ပို့ ပေးခဲ့တယ် ။
အဲဒီမှာ ၈၈ ကျောင်းသားတွေ ONSOB ကို စတင်ဖွဲ့ စည်းဖို့လုပ်ကြရတာပေါ့ ။ ကျနော်လည်းပါခဲ့တယ် ။ ပထမ ဥက္ကဌ မဲရသူက ဒေါက်တာသီဟာ ( USA က လပြည့်ဝန်း တီဗီ ဦးစီးနေသူ ကာတွန်းဆရာ ဦးဘဂျမ်းသား) ရသွားတယ် ။ နောက်တော့ အကသ ထပ်ဖွဲ့ တယ် ။ အဲဒီတုန်းက တက်ကြွသူတွေထဲမှာ တင်မောင်ထူး ( ကနေဒါ) တိုးကြည် (ကနေဒါ) မိုးဇော်အောင် ( USA ) အောင်အောင် ( နော်ဝေ) မောင်မောင်မော် ( BC နယ်သာလန်) စတဲ့ အုပ်စုတွေပေါ့ ။ အကသတွေက ထိုင်းဘုရင်ကြီးကို ပန်းစီးဆက်ပြီး ထိုင်းမှာ နေခွင့်ရဖို့တောင်းကြတာပေါ့ ။
ဋ္ဌေးနိုင် အဖမ်းခံနေရပြီ ဆိုတော့ ကျနော်က ဘန်ကောက်မှာ လူငယ်လေးတွေကို ကူညီနေသူ ဖီးလတ်ရဲ့စားဝတ်နေရေး ဦးဆောင်နေတော့ လှဝင်းက တောထဲဆင်းပြီး ကိုဌေးနိုင်ကို အကသ အတွင်းရေးမှုး အနေနဲ့ အာမခံပြီး ဆင်းခေါ်မယ်လို့ လာပြောတယ် ။ နောက်ပိုင်း သတင်းပျောက်သွားတယ် ။
ဘန်ကောက်ရောက် မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့ အစည်းတွေက ထောက်လှမ်းရေးလို့စွပ်စွဲခံနေရတဲ့ ကိုနေဝင်းအောင် ဌေးနိုင် အပါအဝင် အဖမ်းခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ကယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားကြသေးတယ် ။ မိုးသီးရုံးကို သွားကြသေးတယ် ။ မိုးသီးတပည့်တွေက ထိုးကြိတ်လွတ်ကြတာပါ။ ၂၀၁၀ မှ ဌေးနိူင်နဲ့ တွဲပြီး အသတ်ခံရတာ လှဝင်းဖြစ်နေတယ်ဗျာ ။ အဲဒီအကြောင်း ပြောရင် မျက်ရည်ကျတယ်။
တကယ်ပဲ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်က ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စားစရာမရှိ နေစရာမကောင်း မွဲတေ စုပြတ်သတ်နေတဲ့ ဘဝမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေ ကူညီနေတာ ယားလို့ တောင် မကုတ်အားပါဖူး ။ကျောင်းသားမိဘတွေ ပေးနေတဲ့ကျောင်းသားတယောက် တဘတ်နှုံး နဲ့ ကျွန်တော် မိသားစု အသက်ဆက်တာ ၄ နှစ်နီးပါးပါ ။
အဲဒီနောက်မှာတော့ မဟာချိုင်းမှာ အိမ်ထောင်ကျနေတဲ့ ကိုရဲမင်း နဲ့ ကိုအေးသိန်းထွေး အိမ်ကို သွားလည်ရင်း
အိမ်ထောင်ကျသွားပါတယ် ။ တိုတိုပြောရရင် တစစနဲ့မဟာချိုင်ဒေကို သိန်းနဲ့ ချီပြီး ဝင်လာတဲ့ မြန်မာနိူင်ငံသားတွေရဲ့ပြသနာတွေကို လက်တွေ့ နေ့ စဉ်ဖြေရှင်းနေရတယ် ။ နောက်ဆုံး ABSDFမှာတုံးကခင်ခဲ့တဲ့ ကိုသန်းကျော်ဌေး ( ၆၀၁) ကိုမြင့်လှိုင် ( ၂၀၆ ) တို့ နဲ့ ပေါင်းပြီး မြန်မာပြည်က ကလေးတွေ အတွက် စာသင်ကျောင်းဖွင့်ကျန်းမာရေး ပညာပေးတွေ လုပ်ပြီး ဇတ်မြုတ်သလိုနေလိုက်တယ် ။
မဟာချိုင်မှာ ကျွန်တော့ကို စုထီး လို့ခေါ်ကြတယ် ။ စုဆိုတာ တိုက်ခိုက်တာ ။ ထီးဆိုတာ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ နေရာဒေသပေါ့ ။
အသက်ရှင်ဖို့ဘဝတွေ ရပ်တည်ဖို့ဖို့နေ့ စဉ်နဲ့ အမျှ တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့သူပေါ့ဗျာ။
၉၉ လပ်ဘူရီ ဆေးရုံမှာ ဆေးဝင်တောင်းတဲ့ ၈၈ကျောင်းသားတွေ အသတ်ခံရတာကို ဒေါသထွက်ပြီး
ခရိုင် ဆရာဝန်ကြီးတွေကို ကလန်ကဆန်လုပ်လို့ထောက်လှမ်းရေးကို သတင်းပို့ လိုက်တာ လာဖမ်းပြီး စာရင်းစစ်တာ ၁၉၉၂ လောက်က နိုင်ငံရေးသမား စာရင်းဝင်တာနဲ့အဖမ်းခံရပြီး နယ်သာလန်ရောက်သွားတာပါဘဲ ။
ကျနော့်လို ပြည်ပမသွားချင်ဘဲ ဖမ်းပို့ လို့ သွားရတာ ၈၈တွေ ၂၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ် ။
ထက်ဆင်စီးပွားရေး အုပ်စု အစိုးရနေရာဝင်ဖို့မီဒီယာတွေသုံးနေတာ နိူင်ငံတကာက နားလည်တော့ အားလုံးကို ထိုင်းမှာမနေခိုင်းတော့ဖူးလေ ။ သူ့ လက်ထက်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စနဲ့ လူတွေ ပစ်သတ်ခံရတာ မနဲပါဘဲ ။
ကျနော် မဟာချိ်ုင်မှာ HIV ရောဂါ ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်တွေကို ခရိုင်အဆင့် ကျန်းမာရေးဌါနနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာပြည်က လာတဲ့ လူထုပညာပေး အစီအစဉ်တွေကို လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ဆုံး ၁၉၉၉ မှာ UN AIDS ညီလာခံမှာ ကုလားထိုင်တလုံးနဲ့ စင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ AIDS ရောဂါဝင်နေပြီလို့နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးးရ လက္ခံလာအောင် တရားဝင်ပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီမှာ ရိုက်လာခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့ ဓါတ်ပုံတွေ အခိုးခံရပါတယ် ။ နောက်တော့ နယ်စပ်က တပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေ အဆက်မပြတ် မဟာချိုင်ကို လာပြီး လေ့လာကြပါတယ် ။ ထိုင်းနိုင်ငံထဲက မြန်မာအတိုက်အခံ ရှင်းလင်းရေးစီမံချက်နဲ့နောက်တော့ အဖမ်းခံရပြီး မနီလွိုင်ကျောင်းသားစခန်းထဲရောက်သွားပါတယ် ။
မြန်မာနိူင်ငံရေးသမားတွေ ထိုင်းအစိုးရ ပြည်ထဲရေးမှာ မှတ်ပုံတင်တော့ ကျွန်တော့ကို ဘာသာပြန်ဖို့သူငယ်ချင်းတွေက ပြောလို့ ၂ နှစ်နီးပါး ဘာသာပြန်ရသေး တယ်လေ။ပြေးလို့ ဘယ်လွတ်မလဲ ။
ထိုင်းပြည်ထဲရေးက ကျနော့်ကို လုံခြုံရေးအရ မနက်တကြိမ် ။ ညနေတချိန် ရုံးမှာ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါတယ်။
အဲဒီလို ကျနော့်ဘဝက စဉ်းစားရည်ရွယ်ထားတာတွေ တခုမှဖြစ်မလာဖူး ။ဘာဖြစ်မှန်းကို မသိခဲ့တာပါ ။
အဲဒီတုန်းက ထောင်ကျသလို ဖြစ်နေတော့ အရမ်းကို ရှုပ်ထွေးနေတယ် ။
စခန်းထဲမှာ ဆရာကျော်ဆွေက ဦးစီးပြီး ABSDF က ကျဆုံးသွားတဲ့ ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ တွေကို ဆွမ်းသွတ်အမျှဝေပါတယ် ။ ကျွန်တော် မသွားပါဖူး ။ ကိုဌေးနိုင် အဖမ်းခံရစဉ်က ရှိနေတဲ့ တပ်ထဲက ရဲဘော်လေးတွေ တပ်ခွဲမှုးတွေ နဲ့ ပြန်ဆုံပါတယ် ။ သူတို့ ကလည်း တခုခု ပြောချင်နေကြပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော် UNHCR မှာ ဘာသာပြန်လုပ်နေတော့ လူတဦးတယောက်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီး မနေချင်တာလဲပါတာပေါ့ ။
မျှော်လင့်ချက် ပျောက်သွားလုလုဆဲဆဲ လူတွေရဲ့ ပူပင်မှုကို ကျွန်တော် အားပေးခဲ့တယ် ။
စိတ်ထဲမှာတော့ ကိုဌေးနိုင် ဖြစ်မှန်ကို တတိယနိူင်ငံရောက်မှ စုံစမ်းမယ်လို့တေးထားလိုက်တယ် ။
အိမ်ကိုဖုန်းဆက်တော့ အမေ့ကိုတော့ တောထဲမှာ သေဆုံးပြီ ။ လူမှားပြီး အသတ်ခံရတယ် ။
မြောင်းထဲရောက်သွားပြီလို့အဖြေပေးခဲ့ပါတယ် ။မိဘ မောင်နှမတွေက တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ သူတွေဆိုတဲ့ပီတိ စိတ်ခွန်အား မျှော်လင့်ချက်ကို အဲဒီတုံးက မပျက်စီးစေချင်ဖူး ။ အဲဒီစိတ်နဲ့ပါ။
ပြည်တွင်းက လူတွေအားလုံး ထောက်လှမ်းရေး သံကွန်ချာ စနစ်အောက်မှာ ချောင်းတောင် ကျယ်ကျယ် မဆိုးရဲကြဖူးလေဗျာ ။ သူတို့ စိတ်ထဲမှာ ဘုရားရှစ်ခိုးတဲ့ အချိန်မှာတောင် စိတ်ချမ်းသာတာမှ မဟုတ်ကြတာ ။ ပြည်ပ မြန်မာတွေ တိုင်းပြည်အတွက် ကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးက သူတို့ အတွက် နေ့ စဉ်ခွန်အားဘဲလေ ။ အဲဒီတုံးက ၈၈ကျောင်းသားတွေနဲ့NLD ဆိုရင် ထောင်ထဲမှာလေ။
ရန်ကုန်မှာ နေတုံးက ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ ပေါင်းပြီး မြေနီကုန်းမှာ နိူင်ငံခြားဖြစ် အရက်တွေရောင်းပြီး ဒေါ်လာတွေ က ကိုဌေးနိုင်ဆိုသူက အိမ်ကို အမြဲတန်းလာလည်တတ်ပါတယ် ။ အရပ်ရှည်တာလဲတူတယ် ။နာမည်ချင်းလဲ ဆင်တူတယ် ။ ကျနော်တို့တောထဲက ထွက်လာပြီးနောက် ၁၉၄၅ ဂျနှီဗာ သဘောတူညီချက်တို့ 
၁၉၈၈ နိုင်ဝင်ဘာလ ပထမ ညီလာခံက ကြုံတွေ့ လာနိုင်တဲ့ သူလျှို အမှုတွေ အတွက်
ကျောင်းသားတပ်မတော်မှာ ဖွဲ့ စည်းပုံဥပဒေ ထဲမှာ အတိအလင်းရေးထားတယ်။
တပ်ဖွဲ့ ဝင်မည်သူ တဦးတယောက်ကို မှ ညင်းပန်း နှိက်စက်ခြင်းမပြုရ။ ၇န်သူ့သူလျှို၊သုံ့ ပန်းကိုရမိက လူ့ အခွင့်အရေးအပြည့်အဝပေးပြီး စစ်ဆေးရမည်။
တရားဥပဒေ အရဆုံးဖြတ်ပြီး၊နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းများသို့ လွှဲအပ်ရမည်။တပ်ရင်းများမှသေဒဏ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိ။ဗဟိုကော်မတီမှသာ သေဒဏ်ကို စီရင်ခွင့်ရှိသည်။
သေဒဏ်ကျခံရမည့်သူသည် အနီးကပ်ဆုံး ညီလာခံတွင် အယူခံပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
ညီလာခံမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း။အတည်ပြုခြင်း ပြုရမည်။။ဒါတွေကိုကျော်လွားပြီး သတ်ဖြတ်၊ရက်စက်
ခဲ့သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ် က ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို လာရောက်လွှမ်းခဲ့တာဘဲ။
ထိုသူတို့ ကလည်း ၊ထို အချိန်က အာဏာရှိနေကြတယ်။
လိုက်နာမှု မရှိတော့ဘဲ လူမှားပြီး သတ်တယ်လို့ထင်နေခဲ့တာလေ ။
နယ်သာလန်ကိုရောက်ပြီး အခြေနေထိုင်ရေး အတွက် အင်္ဂလိပ်စာ မကျွမ်းကျင်သူတွေကို လိုက်လံကူညီနေခဲ့တယ် ။ ABSDF တပ်ဖွဲ့ ဝင်ဟောင်းတွေကို မသိမသာနဲ့ တောထဲက အကြောင်းတွေ ပြောဆိုရင်းနဲ့ကိုဌေးနိုင်က အကြောင်းမေးမိရင် စကားဖြတ်တာနဲ့ ကြုံနေရတယ် ။ ကျွှန်တော် သိလာတာက တောထဲမှ ကိုဌေးနိုင်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး တခုခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ သိလာရတယ် ။ ဘာဖြစ်မှန်းမသိသေးဖူး ။
ဒီကိစ္စဟာ မိုးသီးဇွန်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာဘဲ မှတ်ချက်ချလို့ ရသေးတယ် ။
၂၀၀၅ ဂျာမဏီမှာ ဥရောပရောက် မြန်မာတွေ တွေ့ ဆုံကြတော့ ဘစောထွန်းနဲ့ တွေ့ တယ် ။ ABSDF တပ်ဖွဲ့ ဝင်ဟောင်းဆိုတော့ ရင်းရင်းနှီးနှီး စကားပြောဖို့ ကြိုးစားတာကို ခပ်တည်တည်ကြီးနဲ့ ပြန်ဆက်ဆံတာ ခံရတယ် ။ ကျနော် ဘာမှ မသိသေးတာကိုး ။ နယ်သာလန်လာလည်ရင်လည်း ရဲဘေ်ာလေးတွေ အိမ်မှာ နေရင် ဘီယာတွေ ဆေးခြောက်တွေပါ ဝယ်ပေးရလို့ညဉ်းသံတွေ ကြားလာရတယ် ။
မိုးသီးဇွန် လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေနောက်က တောက်ရှောက် လိုက်ပြီး ဆက်သွယ်ပြီး သတင်းယူနေတယ် ။ ၂၀၀၇ လောက်မှာ မိုးသီးဇွန် မဲဆောက်က ညီငယ်လိုခင်တဲ့ လူငယ်တဦး အိမ်မှာ စပြီး ဆက်သွယ်မိတယ် ။ မန်းဝင်းမောင်ရဲ့ မြေးဖြစ်သူ စတင်းလေ အိမ်မှာ ။ သူက မိုးသီးနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ပေးဖို့ ကြိုးစားတယ် ။ မိုးသီးဇွန် ရှောင်သွားတယ် ။ နောက် ဂျပန်က မိုးသောက်ကြယ် စာပေအဖွဲ့ က ချိတ်ပေးတယ် ။ မိုးသီးဇွန်ရှောင်သွားတယ် ။
ဆင်ဖြူ့ မျက်နှာ ဆင်မဲ မကြည့်ဝန့် ဖူးဆိုတာ နားလည်လာတယ် ။
၂၀၁၀ မှာတော့ ဒေါက်တာနိုင်အောင် ။ မိုးသီးဇွန် ။ မောင်မောင်ကျော်တို့ပုံကြီး အင်တာနက်မှ တက်လာတယ် ။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ မဲဆောက်မှာ ပြန်လာတွေ့ ဆုံကြတယ် ဆိုပြီး စာသားက အေးေးအး ဆေးဆေးနေတတ်တဲ့ကိုကိုဦးနဲ့ ကိုသန်းဝင်းဆီကို ရောက်သွားတယ် ။ မောင်မောင်ကျော်က ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တဲမှာ တကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့လူ ။ နိုင်အောင်က ၈၈ သမိုင်းမရှိဖူး ။ မိုးသီးက လူသတ်တယ်ဆိုပြီး ကိုသန်းဝင်းက စာထုတ်လိုက်တယ် ။
အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော်လဲ အဖြစ်မှန်ကို သိလိုက်ရတယ် ။ သေချာအောင် လိုက်စုံစမ်းတယ် ။
၂၀၁၀ ဆွီဒင်မှာ ဥရောပရောက် မြန်မာတွေ အစည်းအဝေးလုပ်ကြတယ် ။ ABSDFက ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေ ပြန်ဆုံကြတယ်ပြောတယ် ။ နယ်သာလန်က သွားတဲ့ ကိုနိုင်ဝင်း( သုတေသန) က ကျွန်တော့ကို နားချတယ် ။ တောတွင်း တိုက်ပွဲတွေမှာ ကျောင်းသားတွေ ကျဆုံးသွားတာ ၇၀၀ ကျော်ရှိတယ် ။ ကိုဌေးနိုင်ကို တော်လှန်ရေး အတွက်ပေးလိုက်ပါတဲ့ ။ တိုက်ပွဲကျတာနဲ့သူလျိုလို့ စွပ်စွံပြီး အသတ်ခံရတာ မတူဖူးထင်တယ် ။ခင်ဗျားဘယ်လို ခံစားရမလဲ ။ ကျနော် အောင့်သက်သက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ ပြောလိုက်ရတယ် ။
သူလဲ သေသေချာချာသိပုံမပေါ်ပါဖူး ။ သူလဲ တခြားတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေလို အနှစ် ၂၀ ကျော် အလိမ်ခဲရတဲ့ စာရင်းထဲကလူလေ ။
အဲဒီတုန်းက ဒေါက်တာနိူင်အောင် အဖွဲ့ က ( စစ်ကော်မရှင် ၄ ဦး နိူင်အောင် ကျော်ကျော်( မျက်နှာက လေးထောင့်နဲ့ မို့ဆယ်ပြားစေ့ ) လှဌေး ( မပ) ကျော်ကျော် (မပ) တို့ က ဆရာနေဝင်းအောင်နဲ့ကိုစိုးလင်းကို ရိုက်နှက်ပြီး ကိုဌေးနိုင်နဲ့ ကိုအောင်သူ ဟာ ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ကြောင်းအသံထွက်ဝန်ခံခိုင်းတယ် ။
တချိန်ထဲမှာဘဲ ကိုဌေးနိုင်ကို လင်ရှိမယားနဲ့ ဖေါက်ပြန်တဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ ထွက်လာတယ် ။ နိုင်အောင် လက်အောက်က ကျောင်းသားရဲဘော်တွေ နဲ့ မိုးသီးလက်အောက် ကျောင်းသားရဲဘော်တွေ အချို့ လျို့ ဝှက် အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတာ နှစ် ၂၀ ကျော်မှ သိရတယ် ။ တို့ မီးရှို့ မီးတွေပေါ့ ။
အဲဒီအချိန်က ဌေးနိုင်မှာ ဘန်ကောက်လာတုံးက ထိုင်းနိုက်ကလပ်ပို့ ပေးတယ် ။ ပြည့်တန်ဆာရုံပို့ ပေးတဲ့
ကျွန်တော့ကိုတောင် တော်တော် စိတ်ဆိုးခဲ့ပါတယ် ။ တော်လှန်ရေး လုပ်နေတာတဲ့ ။ အဲဒါတွေ ကင်းမှ ရမယ် ။ ကျည်ဆံ နောက်က ဝင်သွားမယ်တဲ့ ။
တောထဲမှာ ရန်သူဆိုရင် တခုခုပြောမှားဆိုမှား သွားမှားတာနဲ့ သေတတ်ပါတယ် ။ ဋ္ဌေးနိုင်က အဲလို လူမျိုးပါ။
မိုးသီးဇွန် အောင်သူငြိမ်း ( အောင်နိုင်ဦးနဲ့ ပြည်တွင်းမှာပါ ) တို့ ကဌေးနိုင်ကို ဖမ်းမိန့် ပေးခဲ့တယ် ။
ရန်သူလို့ သတင်းရထားတယ် ။ ပေါ်အောင်စစ်ပါလို့ဝန်ခံအောင်လုပ်ပါလိုအမိန့် ပေးခဲ့တယ် ။့ 
တချိန်ထဲမှာဘဲ ရကသဥက္ကဌဟောင်း ကိုသန်းဝင်းနဲ့ မိုးသီး အယူအဆကွဲတာ ကိုဌေးနိူင်ကြားက ခံရတယ်လို့ လို့ လဲပြောကြတယ် ။
ကျန်းမာပြီး သန်စွမ်းတဲ့ ကိုဌေးနိူင်ကို ကျွန်တော် ထောက်လှမ်းရေးတပ်က ဗိုလ်ကြီးပါ လို့နည်းမျိုးစုံနဲ့နှိက်စက်ခဲ့တဲ့ စစ်ကြောရေး အဖွဲ့ မှာ ဝင်းနိုင်ဦး(ရင်မောင် BBC ) ကျော်ကိုကိုဝင်း ( လက်ရှိ ABSDF) ဘစောထွန်း။ (ဂျာမဏီ) အောင်လွန်း (အမေရိကန်) ၊ ရဲလင်း (မြန်မာပြည်) ။ တို့ ပါဝင်ပြီး တပ်ရင်း ၂၀၈ မှ လူငယ်ကျောင်းသားတွေက အစောင့်လုပ်ရပါတယ် ။
အဲဒီထဲက ရာဇာလေး ဆိုသူက မြန်မာပြည် ခတ္တပြန်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ် ။တိကျစွာ သိတဲ့သူများ ရှိရင်လည်း သတင်းပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ။
ကိုဌေးနိုင် က ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ ဗီဒီယို ရှိနေတယ်လို့ကိုမျိုးဝင်းနဲ့ကိုကျော်ကိုကိုဝင်း ( လက်ရှိ ABSDF) ကကိုဌေးနိူင်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး မေးလာသမျှကို လိမ်လည်နေဆဲပါ ။ နောင်လဲ မိုးသီးဇွန်ကို ထောက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေ လိမ်ကြအုံးမှာပါ ။
၂၀၁၂မှ ရတဲ့စာအရ မိုးသီးဇွန်ရေးလိုက်တဲ့ ကိုဌေးနိုင် ကိုဌေးတင့် ညီအကို ၂ယောက် ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်တာ သေသေချာချာ အာမခံတဲ့ စာတွေက သံရုံးတွေကိုပါ ပလူပျံသွားတယ်လေ ။ကျွန်တော် ဘာသာတရားတွေ အဆုံးအမ လူ့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေ နဲ့လူတွေကို ဆက်ဆံခဲ့တယ် ။ အကူအညီပေးခဲ့တယ်။ မေတ္တာဆိုတာ ရောင်ပြန်ဟတ်ပါတယ် ။
ဋ္ဌေးနိုင် အသတ်ခံရတဲ့ နေ့ရဲ့ သတင်းမှာ ၂ ပိုင်းဖြစ်နေတယ် ။ စစ်ရုံးထဲမှာ ည၉နာရီကျော်ထိ ဌေးနိုင် အကောင်းပကတိရှိနေသေးတယ်။ဝင်းနိုင်ဦး ( ခ ) ကိုရင်မောင်၊ဘစောထွန်း။့အောင်လွန်း၊ရဲလင်း ။စိန်ရွှေ၊ မက်ဒေါတို့ ဌေးနိုင်ကိုချုပ်ထားတဲ့ နေရာကို ၁၀နာရီလောက်မှာစဝင်တယ်။
စစ်ရေးချုပ် ဝင်းချို ( ယခု မဲဆောက် ) စစ်ရုံးအုပ် စိုးလွင် ( ကြီးမိုက် )တို့ ကို စစ်ရုံးဝန်းထဲက ထွက်ပေးဘို့ဝင်းနိုင်ဦးပြောတယ်။၁နာရီလောက်ကြာတော့ ပြန်ဝင်လို့ ရပြီးလို့ ဝင်းနိုင်ဦးပြောတယ်။ အချုပ်ထဲမှာ ဌေးနိုင်မရှိတော့ဘူး။
စစ်ရုံးဝန်းထဲက ကျင်းအဟောင်းထဲမှာ ထိုင်လျှက်ထည့်လိုက်တယ်။ ဒီနေ့ မိုးသီးဇွန် ရန်ကုန်မှာ အမှိုက်ပုံရှင်းနေတယ် ။ စိတ္တဇဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ် ။ ဌေးနိူင်ကို သူသတ်ပြီး ထားခဲ့တာ ပလပ်စတစ် အမှိုက်ပုံလေ။ အိမ်မက်ထဲမှာ မက်နေမှာပေါ့ ။
နောက် သတင်းက မိုးသီး နဲ့နိူင်အောင် ဘယ်လိုတွေ့ ကြလဲမသိဖူး ။ ဘန်ကောက်က အပြန် နိူင်အောင်နဲ့ မိုးသီး ဘတ်စကားပေါ်မှာ တွေ့ ကြရင်း နိူင်အောင်က ဌေးနိူင် ရန်သူ့ လူလို့ ပြောလိုက်တယ် ။ မိုးသီးဇွန်ယုံတယ် ။ ဌေးနိုင်ကို ဖမ်းချုပ်လိုက်တယ် ။ အောင်သူငြိမ်းလဲရှိနေတယ် ။ မိုးသီး အုပ်စု ဝိုင်းပြီးနှိပ်စက်ကြတယ် ။နောက်တော့ မိုးသီးနဲ့ လူအချို့ ကို ကွန်မြူနစ် ယူဂျီလုပ်မှု လက်နက်ခိုးမှုနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မြ ဖမ်းလိုက်တယ် ။ DAB ကလူတွေ ထုတ်လို့ လွတ်လာတယ် ။ အားလုံးထင်တာက မိုးသီးဇွန် ဘန်ကောက်ကို တခါတည်းတက်သွားတယ်လို့ထင်နေကြတယ် ။ ပြသနာက ငွေ နဲ့လက်မှတ်မရှိဖူး ။
မိုးသီး နဲ့ အတူ ကရင်အချုပ်ခန်းထဲက လွတ်လာသူတွေက ABSDF နဲ့ စစ်ရုံးထဲ မသွားဖူး ။ သီးသန့် နေရာမှာ ရေချိုး မိုးချိုးနေကြတယ် ။စတင်ပေါင်းစည်းရေး လုပ်ချိန်ဆိုတော့ ဒေါက်တာ နိူင်အောင် လည်းရောက်နေတယ် ။ မိုးသီးဇွန် ဝင်းနိုင်ဦး ( ရင်မောင် ဘီဘီစီ ) ဘစောထွန်း လွမ်းဏီ ဇော်ရဲ ရဲလင်း တို့ အုပ်စုလိုက် ဌေးနိုင်ရှိတဲ့နေရာ တိုက်ရိုက်သွားပြီး သတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်လို့ ပြောတယ် ။
ပြန်ပြောပြတဲ့ လူက ကျွန်တော့ကို မျက်ရည်တွေ ကျပြီး ပြောပြနေတာ ။ မှန်လား မမှန်လားမသိဖူး ။ဌေးနိုင် ကိစ္စကိုလည်း လိုက်ပြီး အမျိုးမျိုးနှောက်ယှက်နေတာ ဖတ်နေရတယ်လေ ။
ဒေါက်နိူင်အောင်နဲ့မိုးသီးဇွန် လူသတ်ပြီး လိမ်လည်ခဲ့တာ အခုဆိုင် အနှစ် ၂၀ကျော်ခဲ့ပါပြီ . အရင်က တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အစည်းတွေကို
လိမ်ခဲ့ရတယ်။ နောက် ပြည်ပရောက် မြန်မာ့အဖွဲ့ အစည်းတွေကို လ်ိမ်ခဲ့ရတယ် ။ လက်ရှိ မြန်မာပြည် အစိုးရကို လိမ်နေရတယ် ။
နောက်ဆုံး အတင့်ရဲလာတာကတော့ မီဒီယာတွေကတဆင့် ပြည်တွင်းက လူထုကို လိမ်ညာနေတာပါဘဲ ။
တကယ်တော့ ပြည်တွင်းက အများစု ထင်နေကြသလို ပြည်ပ ၈၈တွေ အားလုံးက နိုင်ငံရေး လုပ်စားနေကြတဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါဖူး။ လုပ်စားနိုငိလောက်တဲ့ ဘာသာစကားမတတ်ကြပါဖူး ။ ၈၈တွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို အနှစ် ၂၀ ကျော် အတွင်း ဖျက်ဆီးခဲ့သုကို ပြန်ကြည့်ရင် ပြည်ပက တရားခံ စာရင်းက ၂၀ ကျော်လောက်ဘဲရှိပါတယ် ။
ABSDF တပ်ဖွဲ့ ကို လက်ကိုင်တုတ်လုပ်ပြီး နာမည်ကြီးအောင် ချမ်းသာအောင် လုပ်နေတဲ့ သူတွေ မြန်မာပြည်ဝင်နေကြပြီဘဲဗျာ ။ပြည်ပမှ ကျန်နေခဲ့တဲ့ အများစုက ခြေတွေ ပြတ် လက်တွေပြတ် ဘဝတွေပျက်နေဆဲ့ပါ ။ မြန်မာ့တပ်မတော်ကြီးက အားလုံးမကောင်းတာမှ မဟုတ်သလို ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်ကလည်း အားလုံးမကောင်းတာ မဟုတ်ပါဖူး။
အောင်နိုင်သူတွေရေးတဲ့ သမိုင်းဟာ အချိန်တခုကို ကျော်လွန်ရင် အဖြစ်မှန် သမိုင်းက နောက်က ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်လာတတ်ပါတယ် ။ မိမိ ပြုမူ စဉ်းစား လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတရားကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားရပါတယ် ။ စိုက်တဲ့ အတိုင်း ရိပ်သိမ်းရပါတယ် ။ လောကကြီးရဲ့နိယာမပါ။ဝိုင်းဝန်း လိမ်လည်နေသူတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ် ။ ဖြစ်ရပ်မှန် ပျောက်ပျက်သွားအောင် လောကကြီးကို လိမ်တယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး ခံစားရသူက မိမိရဲ့ဝိဥာဏ် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လူထုတိုက်ပွဲဝင်ကော်မီတီနဲ့တိုက်ဖျက်မယ်လို့မိုးသီးဇွန် ဦးဆောင်ပြီး ၂၀၁၀ ဧပြီလလောက်က မဲဆောက်မှာ အစည်းအဝေးကြီးလုပ်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာပြီး လက်ရှိ အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပွဲက တစထက်တစ အောင်မြင်လာပါတယ် ။ ပြည်ပက ၈၈ ကျောင်းသားတွေ အားလုံးကို မိုးသီးဇွန် သစ္စာဖေါက်လိုက်တယ် ။ ရရာနည်းနဲ့ပြည်တွင်းကို ဝင်လိုက်တယ် ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေကို တိုင်းပြည်ထဲက လူတွေ သိစေချင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော့် ညီ အသက်ပေးခဲ့ရတယ် ။ အလိမ်ခံရတယ် ။ ခင်ဗျားတို့ လည်း ကျွန်တော့လို ဆွေမျိုးတွေ အသက်ပေးတဲ့အထိ အလိမ်မခံရဖို့ ပြောပြလိုက်ပါတယ် ။
ပြည်ပရောက် ၈၈ အများစုက တိုင်းပြည်အတွက် တကယ် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ရင် လက်ရှိ အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးပြီး ၈၈တွေ ပြန်လည်တွေ့ ဆုံပွဲ လုပ်ကြမယ်လို့စီစဉ် သူတွေလည်း ရှိနေပါပြီ ။ ပြန်လို့ ရတဲ့သူတွေလည်း ပြန်နေကြပါပြီ ။ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း အခြေအနေ အတိုင်းအတာ တခုရောက်ရင် တိုင်းပြည်ထဲက လူထု အကျိုးရှိစေမဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေ အတွေ့ အကြုံတွေကို လမ်းကြောင်းတွေကို သွားရောက် လည်ပတ်ပြီး ပြောပြချင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ မှာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သွေးသားဖြစ်သူ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတိုင်းပြည် အနာဂါတ်အတွက် လမ်းညွန်နေပါပြီ ။
မြန်မာပြည်ထဲမှာ တရားဥပဒေကို လူတိုင်းလိုက်နာဖို့ လိုပါတယ် ။
စစ်အစိုးရ လက်ထက်က အုပ်ချုပ်သူတွေ ထားခဲ့တဲ့ စာချုပ်တွေ သဘောတူညီချက်တွေ လွတ်တော်ထဲမှာ အသစ်ပြန်လုပ်ဖို့ အချိန်ပါပြီ ။လူထု အကျိုးမဲ့ စာချုပ်တွေ စီစစ်ဖို့ လိုနေပါပြီ
လူသတ်သမားတွေကို အချက်အလက်တွေနဲ့ တရားရုံးတင်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ။
အမေမေးလာမဲ့သူ့ သားငယ် အခြေအနေကို ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ ။
ကိုဌေးနိုင် သူငယ်ချင်းတွေကို တောထဲမှာ ဘာဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲ ဘယ်လို အဖြေတွေ ပေးမလဲ ။
မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတွေရဲ့အမှန်တရားဖေါ်ထုတ်မှု အသံက
ကျနော့်တံခါးကို လာခေါက်နေပြီ ။
ခင်ဗျားတို့ တံခါးကိုလည်း ခင်ဗျားတို့ရင်သွေးငယ် အနာဂါတ်အတွက်
မကြာခင် အမှန်တရားတွေက လာခေါက်တော့မှာပါ ။
Posted by Mr Htay Tint at 1:22 AM